လာလည်သူ အားလုံးကို ဒီနေရာမှ ကြိုဆို ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ ပျော်ရွင်လန်းဆန်းနိုင်ကြပါစေ။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၀၀) ကျော်ကာလများ၌ မွန်လူမျိုးတို့၏ အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပဲခူးနိုင်ငံ (ဟံသာဝတီ) ကောင်းစားခဲ့စဉ်က မည်မျှချမ်းသာကြွယ်ဝသည်ကို ပဲခူးနေပြည်တော်တွင် နေထိုင်ခဲ့သော ဗင်းနစ် (စ) မြို့သား ကျောက်မျက်ရတနာကုန်သည်တစ်ဦး၏ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၆၀၀-ပြည့်နှစ်တွင် ရေးသားထားသော မှတ်တမ်းမှ ကံအားလျှော်စွာ ခန့်မှန်းနိုင်ပေသည်။ မူရင်းမှာ “သူသည် ဘုရင့်ဘဏ္ဍာတော်များ ထားရှိရာ ရဲတိုက်မြင့်သို့ ရောက်သွားရာ ပစ္စည်းမည်မျှ များပြားသနည်းဟူမူ ဆင်အစီး (၆၀၀) နှင့် ၄င်းအရေအတွက် မြင်းအစီးတို့သည် ရွှေနှင့်အဖိုးတန် ကျောက်မျက်များချည်းကိုပင် သယ်ယူရန် လုံလောက်မည် မဟုတ်သည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ ငွေနှင့်အခြားပစ္စည်းများ ရှိသေးသည်ကို တန်ဘိုးထား၍ ကျွန်ုပ်တို့ ထည့်မတွက်သေး” ဟု ဖော်ပြရေးသားထားပေသည်။ (စီးမင်စဲဝဲလ်လီဖရွိုင် ရေးသားသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်သူများနှင့် မြေ စာအုပ်၊ စာမျက်နှာ ၃၆ မှ ကောက်နှုတ်ချက်)
မွန်တို့သည် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဘာသာစကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတို့ဖြင့် မြန်မာပြည် အောက်ပိုင်း ရာမညဒေသကို လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ အထက် မြန်မာနိုင်ငံကိုမူ မြန်မာမင်းတို့က အုပ်စိုးလျှက်ရှိသည်။ ထိုခေတ်ထိုအခါသည် ပဒေသရာဇ်နယ်ချဲ့စနစ်ကို လက်ကိုင်ပြုသောခေတ်၊ မိမိ၏ အာဏာစက်အောက်သို့ အခြားသော ထီးဖြူဆောင်းမင်းတို့ကို သိမ်းသွင်း၍ အုပ်စိုးသောခေတ် ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့ကြောင့် ဟံသာဝတီမွန်နိုင်ငံတော်ကို စိုးမိုးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ခဲ့ကြသည့် ဝါရီရူမင်းအဆက်အနွယ် ဗညားဒလသည် အင်းဝတွင် စိုးစံသော မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိမင်း လက်ထက်တွင် နိုင်ငံအားပျော့မှုကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ အင်းဝ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၇၅၁-ခုနှစ်၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၁၁၃-ခုနှစ်၊ တန်ခူးလ္ဆန်း (၈) ရက်နေ့တွင် သိမ်းပိုက်လိုက်သည်။ မြန်မာတို့သည် မိမိတို့၏ နယ်မြေဆုံးရှုံးသည်ကို ဦးအောင်ဇေယျ ခေါင်ဆောင်မှုအောက်တွင် မွန်တို့ကို တော်လှန်ပုန်ကန်ကြပြန်သည်။ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၇၅၃-ခုနှစ်၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၁၁၅-ခုနှစ်တွင် အင်းဝမြိူ့ကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ကြရာ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၇၅၇-ခုနှစ်၊ ကောဇာသက္ကရာဇ်-၁၁၁၉-ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆုတ် (၈) ရက်နေ့တွင် ဟံသာဝတီနိုင်ငံကို လက်အောက်ခံနိုင်ငံအဖြစ် ပဒေသရာဇ်နယ်ချဲ့စနစ်အရ သွတ်သွင်းလိုက်သည်။ ဤတွင် မွန်တို့၏ မြို့တော်ဟံသာဝတီသည်လည်း ပျက်စီးခဲ့လေသည်။ သူ့ကျွန်မခံလိုသော သန်းပေါင်းများစွာသော မွန်တို့သည် ထကြွပုန်ကန်ကြပြီး တနသာင်္ရီတိုင်း၊ သထုံနယ် တလျှောက် နှင့် ယိုးဒယားပြည်သို့တိုင်အောင် ဇွဲနဘဲကြီးစွာဖြင့် ခုခံဆုတ်ခွါခဲ့ကြရသည်။ မွန်လူထုကြီး တစ်ရပ်လုံးသည် မိမိတို့၏ နောက်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်သော ဗညားဒလ ကျဆုံးစေကာမူ မိမိတို့၏ အချူပ်အချာအာဏာပိုင်မှုကို နှုတ်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ စာချုပ်အားဖြင့် လည်းကောင်း၊ မည်သူကိုမျှ ကတိပြု လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး လွှဲအပ်ခြင်း မပြုခဲ့ပေ။ သို့သော် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် ဆုံးရူံးကာ အခြားလူမျိုး လက်အောက်သို့ ကျရောက်ခဲ့ရလေသည်။ ဤသို့ ကျရောက်ခဲ့သော်လည်း ကျွန်ဘဝအဖြစ် ခေါင်းငုံ့မခံလိုသော မွန်တို့သည် မွန်မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည့် စစ်သေနာပတိ တလဗန်း၏ ခေါင်းဆောင်မှုအောက်တွင် ထကြွပုန်ကန်ခဲ့ကြသည်။ ၁၇၇၃-ခုနှစ် ဘိုတော်ဘုရားလက်ထက်တွင် တစ်ကြိမ် ပုန်ကန်ထကြွပြီး ယိုးဒယားနိုင်ငံအတွင်းသို့ နိုင်ငံရေး ခိုလှုံသူများအဖြစ် ဝင်ရောက်တိမ်းရှောင်ကြရ ပြန်သည်။ (ဤတွင် မွန်တို့၏ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဖြစ်သော် စာပေကျမ်းဂန်များ၊ သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးများ မီးရိူ့ဖျက်ဆီးခံရပြီး ရဟန်းသံဃာအများအပြားလည်း အသတ်ခံရသည့်အပြင် မွန်တို့သည် မိမိတို့၏ ဘာသာစကားကိုပင် ပြောပိုင်ခွင့် မရှိတော့ပေ။) ထိုစဉ်က မပြေးမလွှားနိုင်သော၊ မရှောင်နိုင်သူတို့သည်သာလျှင် မိမိတို့၏ ဟံသာဝတီနိုင်ငံဟောင်း၌ အညှင်းဆဲခံ လူမျိုးအဖြစ် ယနေ့တိုင်အောင် တည်မြဲနေကြရပေသည်။
အလောင်းဘုရားမင်းဆက်သည် မဟာဗမာဝါဒကို လက်ကိုင်ပြုပြီး အုပ်စိုးလာခဲ့ရာ ၁၇၇၁-ခုနှစ်တွင် အတော်အတန် အင်အားချိနဲ့စပြုလာပြီး ဘကြီးတော်လက်ထက် ၁၈၂၄-ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်တို့နှင့် ပထမစစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားရာ ဗမာဘက်မှ ရူံးနိမ့်ခဲ့သဖြင့် ၁၈၂၆-ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၄)ရက်နေ့တွင် ချူပ်ဆိုသော ရန္တပိုစစ်ပြေငြိမ်းရေး စာချူပ်အရ အာသံနယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် နှင့် သံလွင်မြစ် အရှေ့ဖက်ကမ်း အပါအဝင် တနသာင်္ရီတိုင်းများကို အင်္ဂလိပ်တို့က သိမ်းပိုက်လိုက်ကြသည်။ ဤအချိန်အထိဆိုလျှင် ဟံသာဝတီနိုင်ငံတော်ကို ပဒေသရာဇ် နယ်ချဲ့စနစ်အရ ဗမာတို့ နယ်ချဲ့သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်မှာ (၆၉) နှစ်မျှ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ သံလွင်မြစ် အရှေ့ဖက်ကမ်း တနသာင်္ရီတိုင်းကို အင်္ဂလိပ်တို့ အုပ်ချုပ်သည့်အခါ ဗမာမင်းများ အုပ်ချုပ်သော ပဒေသရာဇ်စနစ်ထက် အနည်းငယ် ပုိုမိုသေသပ်သည့် အတွက်ကြောင့် လည်းကောင်း၊ ရှာဖွေစားသောက်ရာတွင် ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသည့် လည်ကောင်း၊ အညှင်းဆဲခံ မွန်လူမျိုးတို့အား မဟာဝါဒအရ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်း မရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့် လည်း ကောင်း၊ ယိုးဒယားနိုင်ငံတွင် ဝင်ရောက်ခိုလှုံနေကြသော များစွာသော မွန်တို့အနက် ထောင်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာတို့သည် မိမိတို့ နေရင်းတိုင်းပြည်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက် နေထိုင်ကြပြန်သည်။
ပုဂံမင်းလက်ထက် ၁၈၅၂-ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်မြန်မာ ဒုတိယစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဗမာတို့ဖက်က ရှုံးနိမ့်ပြန်သဖြင့် ပဲခူးနယ်ကို အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းပိုက်လိုက်ပြန်သည်။ ၁၈၈၅-ခုနှစ်၊ အင်္ဂလိပ်မြန်မာ တတိယစစ်ပွဲတွင် အင်္ဂလိပ်တို့ စစ်နိုင်၍ ကျန်အထက်မြန်မာပြည်အားလုံးကို သိမ်းပိုက်လိုက်သောအခါ မြန်မာတပြည်လုံးသည် အင်္ဂလိပ်လက်အောက်သို့ ကျရောက်ခဲ့ရသည်။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရသည် တိုင်းရင်းသားအပေါင်းတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုကို ဖော်ထုတ်ပေးခြင်း မရှိသဖြင့် မွန်တို့၏ ယဉ်ကျေမှုလည်း တဖြည်းဖြည်း တိမ်ကောလာပြီး လူမျိုးလည်း တစ်စတစ်စ တိမ်ကောစပြုလာသည်။
ကမ္ဘာ့အရှေ့ပိုင်းတွင် ၁၉၀၅-ခုနှစ်၌ ရုရှားနှင့်ဂျပန်တို့သည် စစ်ကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဂျပန်တို့ အနိုင်ရခဲ့ကြသည်။ ထိုစစ်ဖြစ်သည့် ၁၉၀၅-ခုနှစ်မှစ၍ မွန်ဗမာနိုင်ငံသားတို့၏ စိတ်တွင် ငုတ်လျှိုးနေခဲ့သော အမျိုးသားစိတ်ဓါတ်များ ပြန်၍ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်တို့ အုပ်ချုပ်မှု လက်အောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုသမိုင်း၌ မွန်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပေသည်။
၁၉၃၉-ခုနှစ်တွင် မွန်ပညာရှင်များ၊ ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့တို့သည် “ရာမညတိုင်းလုံးဆိုင်ရာမွန်အသင်း” ကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကာလတွင် မွန်တို့သည် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများကို မတောင်းဆိုကြသေးပေ။ မွန်မျိုးချစ်များဖြစ်ကြသော ဦးဘသော်၊ ဦးကျန်၊ ဦဒွေး၊ ဦးချစ်သောင်း၊ ဦးဘသိန်း၊ အရှင်ကောသလ အစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များသည် ရာမညတိုင်းလုံးဆိုင်ရာမွန်အသင်း မှတဆင့် မွန်တို့၏ အကျိုးအတွက် ဘာသာရေး၊ သာသနာရေး၊ စာပေယဉ်ကျေးမှုတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်တွင်ရှိသော သွေးဆေးကန်မွန်ကျောင်း၊ ရေတာရှည်ကျောင်း အစရှိသည့် မွန်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတွင် မွန်စာပေကို မြှင့်တင်သောအားဖြင့် ပဌမပြန်စာမေးပွဲကို ရာမညတိုင်းလုံးဆိုင်ရာမွန်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ ကျင်းပခဲ့သည်။ မွန်မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော မွန်သတင်းစဉ်ကိုလည်း ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ မွန်တို့၏ အမျိုးသား စိတ်ဓါတ်ကို ရာမညတိုင်းလုံးဆိုင်ရာမွန်အသင်းက များစွာ ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၄၀-ခုတွင် ရာမညတိုင်းလုံးဆိုင်ရာမွန်အသင်းကြီအောက်၌ မွန်လူငယ်အသင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်တွင် လှုပ်ရှားနေသော်လည်း ကျေးလက်တောရွာများသို့ မပြန့်နှံ့ခဲ့သေးပေ။ ၁၉၃၈-ခုနှစ်မှ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မတိုင်မီအထိ မော်လမြိုင် နှင့် သထုံခရိုင်ရှိ မူလတန်းကျောင်း (၈၄) ကျောင်းတို့တွင် မူဒူးဆရာတော် နှင့် မွန်လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့တို့၏ ကြိုးပမ်းချက်ကြောင့် မွန်ဖတ်စာကို သင်ကြားခွင့် ရခဲ့ကြသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျပန်ဖက်ဆစ်စနစ် လက်အောက်ကျရောက်စဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် လှုပ်ရှားမှု မပြုနိုင်တော့သောကြောင့် ရာမညတိုင်းလုံးဆိုင်ရာမွန်အသင်းသည် လျှို့ဝှက်၍သာ လှုပ်ရှားနေခဲ့သည်။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့အား ဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်သော ဂျပန်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲတွင် မွန်တော်လှန်ရေးအင်အား (၃၀၀၀) ကျော် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ဖူးသည်။ ဤသို့ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သော်လည်း မွန်လူမျိုးအနေနှင့် ထင်ပေါ်ခဲ့ခြင်း မရှိချေ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အပြီးတွင် ရာမညတိုင်းလုံးဆိုင်ရာမွန်အသင်းကို စနစ်တကျ ပြန်လည်ဖော်ထုတ် စည်းရုံးခဲ့သည်။ မွန်တို့ နေထိုင်ရာ နယ်မြေဒေသအားလုံးသို့ ပြန့်နှံ့ခဲ့လေသည်။ မွန်တို့၏ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်သည်လည်း အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာဖြင့် မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ မွန်အမျိုးသားတို့၏ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်တို့ကို လိုလားကြသူများက မွန်နိုင်ငံရေးအသင်းဖွဲ့များကို ထူထောင်လာကြသည်။ မွန်တိုင်းရင်းသား အစည်းအရုံးကို ၁၉၄၅-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၉) ရက်တွင် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ ဤသို့ လှုပ်ရှားလာရင်း သက္ကရာဇ် ၁၉၄၆-ခုနှစ်တွင် ယဉ်ကျေးမှုကို ဦးစားပေသော ရာမညတိုင်းလုံးဆိုင်ရာမွန်အသင်း နှင့် နိုင်ငံရေးလိုက်စားသော “မွန်တိုင်းရင်းသား အစည်အရုံး” ဟူ၍ မွန်အသင်းဖွဲ့ကြီး နှစ်ဖွဲ့ ရှိလာခဲ့သည်။ မွန်ဦးဖိုချို ခေါင်းဆောင်သော မွန်တိုင်းရင်းသားအစည်း အရုံးသည် ဖ-ဆ-ပ-လ နှင့် ပူပေါင်းပြီး မွန်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို တောင်းဆိုသည်။ တောင်းဆို၍ မရသောအခါ ဖ-ဆ-ပ-လ မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ မွန်တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံးမှ နှုတ်ထွက်ပြီး မရှေးမနှောင်းမှာပင် မွန်တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖြစ်ခဲ့သော မွန်သန်း ခေါင်းဆောင်သော မွန်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကို ဖ-ဆ-ပ-လ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဖ-ဆ-ပ-လ အဖွဲ့ချုပ်မှ အသိအမှတ်ပြု လက်ခံလိုက်လေသည်။
၁၉၄၆-ခုနှစ်၊ ကုန်ခါနီးတွင် မွန်တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံး ခေါင်းဆောင်များသည် ကျိုက္ခမီခရိုင် ပငကျေးရွာတွင် ပထမညီလာခံ ကျင်းပခဲ့သည်။ ၄င်းညီလာခံ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ခဲ့သည်။ တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်တွင် အခြားလူမျိုးများနည်းတူ မွန်လူမျိုးစုအတွက် သီးသန့် အမတ်များ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့်ကို ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရက ခွင့်မပြုခဲ့ပေ။ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်ဥပဒေသစ်ကို တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်မှ ရေးဆွဲသည့်အခါ မွန်တို့၏ အခွင့်အရေးများကို တောင်းဆိုတင်ပြမည့် မွန်အမျိုးသားများကို ကိုယ်စားပြုသော မွန်သီးသန့်အမတ်များ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်လာသည်။ ဤသို့ရှိစဉ် ဖ-ဆ-ပ-လ အဖွဲ့ချုပ်မှ အကယ်၍ ၄င်းတို့ အဖွဲ့ချုပ်အမည်ဖြင့် ဝင်ရောက်အရွေးခံပါက မွန်အမတ် (၁၂) နေရာအတွက် လျာထားပေးမည်ဟု မွန်တိုင်းရင်းသား အစည်အရုံးအသင်းသို့ စကားကမ်းလှမ်းလာသေသည်။ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖွဲ့ချုပ်အမည်ခံပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်အရွေးခံခဲ့သော် အမတ်နေရာထိုက်သင့်သလောက် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၄င်းအမည်ခံ အမာတ်များသည် ဖ-ဆ-ပ-လ အဖွဲ့ချုပ်၏ စည်းမျဉ်းဥပဒေအရ ဖ-ဆ-ပ-လ ဦးစီးအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်များ မရရှိဘဲ လွှတ်တော်တွင် မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တောင်းဆိုချက်များကို မပြုလုပ်နိုင်ပေ။ သို့ဖြစ်၍ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖွဲ့ချုပ်မှ ကမ်းလှမ်းလာသည်ကို လက်မခံပဲ ရာမညတိုင်းလုံးဆိုင်ရာမွန်အသင်းဝင်များ ဖြစ်ကြသော နိုင်လှမောင်၊ မွန်ဦးငွေကိုင်၊ နိုင်ဘလွင် (မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဥက္ကဌဟောင်း)၊ မွန်ဦးရ၊ နိုင်သာနှင်း နှင့် နိုင်စိန်ထွန်း (၆) ဦးတို့သည် တသီးပုဂ္ဂလ မွန်အမတ်များအဖြစ် ဝင်ရောက်အရွေးခံကြသည်။ မွန်တို့သည် ရွေးကောက်ပွဲ အတွေ့အကြုံ နည်းသေး၍ လည်ကောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ခြိမ်းခြောက်လှည့်စားခြင်း အမျိုးမျိုးတို့ကို ခံလိုက်ရ၍လည်ကောင်း နိုင်ခြေရှိသော်ငြားလည်း (၆) ဦးပေါင်း မဲအရေအတွက် (၂၀၀၀၀) နှစ်သောင်းကျော် ရ၍ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၉၄၇-ခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲသော နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေတွင် မွန်အမျိုးသားများကို ကိုယ်စားပြု၍ ပြောဆိုမည့် မွန်အမတ်မရှိသည့်အတွက် မွန်အမျိုးသားများနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်လုံးတစ်ပါဒမျှ မပါဝင်ခဲ့တော့ချေ။
မွန်တို့၏ တရားဝင် တောင်းဆိုချက် (၇) ချက်
ရွေးကောက်ပွဲတွင် အရွေးမခံရသော်လည်း မွန်တို့၏ လိုလားချက်များကို သိလိုပါသည်။ တင်ပြစရာများ ရှိလျှင် ဝန်ကြီးချုပ်သခင်နုနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖ-ဆ-ပ-လ အဖွဲ့ချုပ်မှ တသီးပုဂ္ဂလအမာတ်များအဖြစ် အရွေးခံကြသူများထံသို့ စကားကမ်းလှမ်းလာပြန်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ပြည်ထောင်စု အကျိုးကို ဖြစ်ထွန်းစေမည့် မွန်တို့၏ ဆန္ဒတို့မှာ -
၁။ ပထမပြန်စာမေးပွဲတွင် မွန်သံဃာတော်များအတွက် ပုစ္ဆာများကို မွန်ဘာသာဖြင့် မေးပါရန် နှင့် ပထမပြန် ကော်မတီတစ်ခု ဖွဲ့စည်းပေးပါရန်။
၂။ မွန်နယ်ရှိ မူလတန်းကျောင်းများတွင် မွန်စာကို သင်ကြားခွင့်ပေးရန် နှင့် မွန်ပညာရေးအတွက် ရံပုံငွေ သီးသန့်အုပ်ချူပ်နိုင်သည့် မွန်ပညာရေး ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခု ဖွဲ့စည်းပေးပါရန်။
၃။ မွန်များနေထိုင်ကြသော ခရိုင်၊ မြို့နယ်ဒေသများရှိ အစိုးရဌာနအသီးသီးတို့တွင် မွန်အမျိုးသား အစိုးရအမှုထမ်း၊ အရာထမ်းများ ခန့်အပ်နေရာချထားပေးပါရန်။
၄။ မွန်အမျိုးသားများအတွက် သီးသန့်မဲစာရင်းပြုလုပ်၍ လွှတ်တော်တွင် အချိုးကျ လူဦးရေအလိုက် သီး သန့်မွန်ကိုယ်စားလှယ် အမတ်များ ပေးပါရန်။
၅။ မွန်အမတ်များဖြင့် ဖွဲစည်းထားသော အာဏာနှင့်ပြည့်စုံသည့် မွန်ရေးရာကောင်စီတစ်ခု ဖွဲ့စည်း ပေးပါရန်။
၆။ အခြားလူမျိုးများနည်းတူ ဗဟိုအစိုးရလက်အောက်ခံ မွန်အမျိုးသားစစ်တပ် ဖွဲ့စည်းပေးရန်။
၇။ မိမိတို့ကံကြမ္မာ မိမိတို့ဖန်တီးနိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေကြသောမွန်အမျိုးသားများအား အခြားအမျိုးသားများ နည်းတူ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို ရေးသား စည်းရုံးဆန္ဒပြနိုင်ခွင့် ပေးပါရန်။
အထက်ပါတောင်ဆိုချက်များကို တင်ပြနိုင်ရန် နိုင်ဘလွင် ခေါင်းဆောင်သော မွန်စံသူ၊ နိုင်စိန်ထွန်းတို့ ပါဝင်သည့် အဖွဲ့ကို ၁၉၄၇-ခု၊ ဇူလိုင်လ စတုတ္ထအပါတ်တွင် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဖ-ဆ-ပ-လ ဗဟိုအမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံရန် ကိုယ်စားအဖြစ်ဖြင့် ရန်ကုန်သို့ စေလွှတ်ခဲ့လေသည်။ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် မွန်ကိုယ်စားလှယ် (၃) ဦးတို့ တွေ့ဆုံပြီးနောက် ဖ-ဆ-ပ-လ ဗဟိုအမှုဆောင်များဖြစ်သော ဦးဗဆွေ၊ ဗိုလ်မှူးအောင်၊ ဦးကိုကိုကြီးတို့နှင့် ဆက်လက်ညှိနှိုင်းရန် လွှဲအပ်လိုက်လေသည်။ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် “မွန်နှင့်မြန်မာ အတူတူပဲ မဟုတ်လား အခြားအခွင့်အရေးများ တောင်းဆိုဘို့ လိုသေးသလား” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
ကိုယ်စားလှယ် (၃) ဦးတို့သည် ဖ-ဆ-ပ-လ ဗဟိုအမှုဆောင်များနှင့် မတွေ့ဆုံမီ မွန်တိုင်းရင်းသား အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ မွန်ဦးဖိုချို၊ မွန်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ မွန်သန်း၊ အတွင်းရေးမှူး မွန်ထွန်းရင်တို့အပြင် မွန်အမျိုးသားအင်ဂျင်နီယာ သခင်ကြီး၊ မွန်ဒေါ်နှင်း တို့ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး တောင်းဆိုချက် (၇) ချက်အပေါ် သဘောထားကို တောင်းခံခဲ့ရာ အားလုံးက သင့်တော်မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ မွန်တို့သည် တညီတညွတ်တည်း တောင်းဆိုရာရောက်အောင် ၄င်းတို့အား ဖ-ဆ-ပ-လ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံရန် တိုက်တွန်းသည်ကို လက်ခံကြသည်။
ထိုဆွေးနွေးပွဲမှ ရရှိလာသော ရလာဒ်မှာ-
၁။ မွန်သံဃာတော်များအတွက် အစိုးရပဌမစာပြန်ပွဲတွင် မွန်ဘာသာဖြင့် မေခွန်းပုစ္ဆာထုတ်ပေး၍ မွန်ဘာသာဖြင့် ဖြေဆိုခွင့် ပြုသည်။ အစိုးရပဌမပြန်ဘုတ်အဖွဲ့တွင် မွန်ကိုယ်စားလှယ် ထည့််ပေးမည်ဟု ကတိပြုသည်။
၂။ မွန်များရာဒေသရှိ မူလတန်းကျောင်းများတွင် မွန်ကျောင်းသားများအား မွန်ဘာသာသင်ကြားနိုင်ရန် စီစဉ်ပေး မည်ဟု ကတိပြုသည်။ ပညာရေးနှင့်ပါတ်သက်၍ မွန်တို့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါမည်ဟု ကတိပြုသည်။
၃။ မူလဒီမိုကရေစီနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူပြည်သားတိုင်း ရရှိထားပြီးဖြစ်သဖြင့် အထူးပြောစရာမလိုဟု ဆိုသည်။
မွန်အများစု နေထိုင်ကြသော ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဒေသများတွင် မြန်မာစကားကို ရေလည်စွာ မပြောတတ်သူများအတွက် အုပ်ချုပ်ရေးဘက်တွင် အခက်အခဲမကြုံတွေ့ရလေအောင် မွန်အမျိုးသား (သို့မဟုတ်) မွန်စကား၊ စာပေတတ်မြောက်သော အခြာမျိုးသား အရာရှိအရာခံများဖြင့် ခန့်ထားပေးပါရန် တောင်းဆိုချက်ကိုမူ မယ်မယ်ရရ လက်မခံခဲ့ပေ။ ၄င်းအပြင် နောက်ပိုင်းတွင် အချို့မွန်အရာရှိများကိုပင် မွန်များ နိုးကြားလာမည်စိုး၍ ရပ်ဝေးသို့ ပြောင်းရွှေ့ပစ်သည်များလည်း ရှိသည်။
ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်သူစာရင်းအရ မွန်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်များ ထားရှိရေး၊ ၄င်းကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်သည့် အာဏာနှင့် ပြည်စုံသည့် မွန်ရေးရာကောင်စီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းပေးရေးနှင့် အခြားလူမျိုးများနည်းတူ ဗဟိုအစိုးရလက်အောက်ခံ မွန်အမျိုးသားစစ်တပ်များ ဖွဲ့စည်းပေးရေးတို့ကိုမူ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ၍ လက်မခံခဲ့ပေ။
ဤသို့ဖြင့် မွန်တို့ တောင်းဆိုသော တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးပိုင်ခွင့်ကို ဘုရင်ခံအတိုင်ပင်ခံ ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရအဖွဲ့မှ “မွန်နှင့်ဗမာအတူတူပဲ၊ သီခြားအခွင့်အရေးပေးရန် မလို” ဟူသောအဖြေကို ပေးခဲ့သည်။ အတိုချုပ်၍ ပြောရမည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံရေးအာဏာကို မပေးပဲ ယဉ်ကျေးမှုအခွင့်အရေး အနည်းအကျဉ်းဖြင့်သာ နှစ်သိမ့်လိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ဥပဒေအတွင်း၌ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်လိုကြသော မွန်တို့သည် ၁၉၄၇-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွင်းတွင်း မော်လမြိုင်မြို့ ကျိုက်သုတ်စေတီတော်ရင်ပြင်၌ ညီလာခံတစ်ရပ်ကို ကျင်းပကာ နိုင်ဘလွင်အား ဥက္ကဋ္ဌ၊ မွန်စံသူအား အတွင်းရေးမှူး၊ နိုင်လှမောင်အား ဘဏ္ဍာရေးမှူး၊ နိုင်သာနှင်း နိုင်စိန်ထွန်း မိဟံသာ၊ နိုင်ပန်းသာ နိုင်ဘညွန့်၊ နိုင်သာအောင် တို့အား အမှုဆောင်များအဖြစ် တင်မြှောက်ပြီး မွန်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ကို စတင် တည်ထောင်ကြလေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မွန်အမျိုးသားတို့၏ ကြွေးကြော်သံအဖြစ် တနသာင်္ရီတိုင်း သတင်းစာကို နိုင်ဘလွင်က အယ်ဒီတာအဖြစ်ကွပ်ကဲပြီး ထုတ်ဝေရန် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
ထိုညီလာခံ၌ပင် မွန်တို့သည် သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် ကိုယ်ထီး၊ ကိုယ့်နန်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်ကို ကျင့်သုံးခဲ့သော လူမျိုးဖြစ်သည်။ မွန်ကိုယ်စားလှယ်များ တောင်းဆိုသော အချက် (၇) ချက်သည် ရေးရာကောင်စီအဆင့်မျှသာရှိသော်လည်း ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရမှ မလိုက်လျှောသဖြင့် တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရှိသော ပြည်နယ်ကို ထပ်မံတောင်းဆိုရန် ဆုံးဖြတ်ကြလေသည်။
မုဒုံမြို့ ကမာဝက်ရွာကြီးတွင် မွန်တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံးမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ညီလာခံ၌လည်း ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရသို့ မွန်ကိုယ်စားလှယ်များ တင်ပြခဲ့သော တောင်းဆိုချက် (၇) ချက်ကို အလေးအနက် ထောက်ခံသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ကို ချမှတ်ကြသည်။
နောက်များမကြာမီ မွန်တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံးမှလည်း မွန်ပြည်နယ် ဖော်ထုတ်ပေးရေးကို တောင်းဆိုခဲ့ပေသည်။ ယင်းအစည်းအရုံးမှပင် ရာမညတိုင်းသတင်းစာတစ်စောင်ကိုလည်း ထုတ်ဝေခဲ့သေးသည်။ ထိုစဉ်က မွန်တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံး အမှုဆောင်များမှာ ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ဖိုးချို၊ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်အောင်ထွန်း၊ အတွင်းရေးမှူး နိုင်ချမ်းမွန်၊ နိုင်ဆိတ်နို့၊ နိုင်အောင်တင်၊ ဆရာဖိုးစိန် စသည့်အမှုဆောင်များ ပါဝင်သည်။
မွန်အမျိုးသားတို့၏ တောင်းဆိုချက်သည် တစ်သံတည်း တူညီလာပြီဖြစ်သဖြင့် မွန်တစ်မျိုးသားလုံးကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း စုစည်းနိုင်ရန်အတွက် မွန်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် မွန်တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံးတို့ကို ပူးပေါင်းပြီး မွန်လူမျိုးရေးရာအဖွဲ့ချုပ်ကို ဖွဲ့စည်းရန် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များက လက်ခံသဘောတူခဲ့ကြသည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် မွန်တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံးမှ သဘောတူညီချက်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ သို့ဖြင့် မွန်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် မွန်လူငယ်အဖွဲ့တို့ကို ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းကာ မွန်လူမျိုးရေးရာအဖွဲ့ချုပ်ကို တည်ထောင်လိုက်ကြသည်။ ဥက္ကဋ္ဌမှာ နိုင်လှမောင် ဖြစ်ပြီး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမှာ နိုင်ဘလွင် ဖြစ်သည်။
၁၉၄၇-ခုနှစ်အတွင်းမှာပင် စောဘဦးကြီး ခေါင်ဆောင်သော ကေအဲန်ယူအစည်းအရုံး အမျိုးသားညီလာခံကို မော်လမြိုင်မြို့ ကရင်ကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကရင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော စောဘဦးကြီး၊ ဆရာသာထို၊ စောသာဒင်၊ စောဖိုးချစ်၊ ဦးလှဖေ နှင့် မွန်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်သော နိုင်လှမောင်၊ နိုင်ဘလွင်၊ မိဟံသာ၊ မွန်စံသူ တို့သည် ကရင်ပြည်နယ် နှင့် မွန်ပြည်နယ် ရရှိရေးအတွက် ပဏာမ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထိုစဉ်က ဖ-ဆ-ပ-လမှ ခန့်အပ်ထားသော မြေယာသီးစား ချထားရေး ဘုတ်အဖွဲ့များသည် ‘လက်ငုတ်သီး စား လက်မလွတ်ရေးမူ’ ကို ချိုးဖောက်ကာ မိမိတို့ဘက်သား ဗမာပြည်တောင်သူလယ်သမားအစည်းအရုံး (ဗ-တ-လ-စ) ဝင်တို့အား မြေယာများကို ခွဲခြမ်းပေးပြီး မတရားသီးစားချထားပေးခဲ့သည်။ သို့ဖြင့် သထုံခရိုင်နှင့် မော်လမြိုင်ခရိုင်တို့တွင် မွန်လူမျိုးရေးရာအဖွဲ့ချုပ်ဝင် မွန်လယ်သမားများအဖွဲ့မှ အိုးစည်ဗုံမောင်းများဖြင့် ထွန်းတုံးတိုက်ပွဲ၊ ကောက်စိုက်တိုက်ပွဲများကို ဆင်နွှဲပြီး အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဖ-ဆ-ပ-လ မှ ချမှတ်လာသော အခြားသော စီမံကိန်းများတွင်လည်း မတရားမှု မှန်သမျှကို တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သဖြင့် အောင်မြင်မှုများ ရသင့်သလောက် ရခဲ့သည်။
၁၉၄၈-ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက်၊ လပိုင်းလောက်တွင် ဖ-ဆ-ပ-လ မှ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ် ဖော်ထုတ်ရေးကို လျှစ်လျူးရှုထားသဖြင့် ကေအဲန်ယူ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ ကြီးမှူး၍ နေရာအနှံ့အပြားတွင် လူထုဆန္ဒပြပွဲများ ကျင်းပခဲ့သည်။ မွန်လူမျိုးရေးရာအဖွဲ့ချုပ်မှ ကြီးမှူးသော မော်လမြိုင်မြို့ လူထုဆန္ဒပြပွဲတွင် မွန်လူထုအင်အား (၂၀၀၀၀) ကျော် ပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ လူထုဆန္ဒပြပွဲ ကြွေးကြော်သံများအဖြစ် “မွန်ပြည်နယ် ချက်ချင်းပေး” “ပြည်တွင်းစစ် အလိုမရှိ”၊ “မြန်မာတစ်ကျပ်၊ မွန်တစ်ကျပ်” “မွန်နဲ့ဗမာ မတူဘူး” စသည်တို့ကို ကြွေးကြော်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ မွန်တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံးမှ ကြီးမှူး၍လည်း လူထုဆန္ဒပြပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်။
၁၉၄၇-ခုနှစ် ကုန်ခါနီးတွင် မုဒုံမြို့နယ်၊ ဖားအောက်ကျေးရွာတွင် မွန်လူမျိုးရေးရာအဖွဲ့ချုပ်၏ ညီလာခံကို (၃) ရက်တိုင်တိုင် သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုညီလာခံမှ မွန်ပြည်နယ်ဖော်ထုတ်ပေးရေး အဆိုကို ထပ်မံဆုံးဖြတ်ပြီး ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရထံသို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များကိုလည်း အမြန်ပြုပြင်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ညီလာခံမှ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် နိုင်ဘလွင်၊ နိုင်စံသူ၊ နိုင်ဘညွန့်၊ မိဟံသာ၊ နိုင်သိမ်းမောင်၊ နိုင်သာအောင်၊ နိုင်ထွန်းတင်၊ နိုင်ဖိုးကောင်းတုိ့ကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုဖား အောက်ရွာတွင် ကျင်းပခဲ့သော ညီလာခံသည် မွန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်တိုက်ပွဲတွင် ထင်ရှားသော မှတ်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။
ညီလာခံကျင်းပပြီးနောက်ပိုင်းတွင် မွန်တို့၏ လိုလားချက်ကို မည်သို့မျှ အကြောင်းမပြန်ဘဲ၊ ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရသည် မော်လမြိုင်ခရိုင် လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုကာ အစိုးရတပ်ရင်းတစ်ရင်းကို ပို့ထားလိုက်လေသည်။ ဤသို့ ပြုမူခြင်းသည် မွန်တို့၏ တောင်းဆိုချက်ကို လိုက်လျှောမည့်အသွင်ထက် အရေးယူတော့မည့် အသွင်ကို ဆောင်လာသည်။ မွန်အမျိုးသားတို့၏ လှုပ်ရှားမူကိုလည်း မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်မှုများ ပြုလုပ်လာသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေတွင် ကရင်အမျိုးသားတို့သည် မိမိတို့၏ အမျိုးသားများကို ကာကွယ်ရန် ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (ကေ-အဲန်-ဒီ-အို) ကို ဖွဲ့စည်းကြပြီးဖြစ်သည်။ မွန်တို့ကလည်း မိမိတို့အမျိုးများကို ကာကွယ်ရန် မွန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (အမ်-အဲန်-ဒီ-အို) ကို ဖွဲ့စည်းကြလေသည်။ မွန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွင် လက်နက်များ မရှိပေ။ စစ်ပညာကိုသာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ မွန်တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံးမှလည်း ၄င်းတို့စည်းရုံးထားသော နယ်မြေများတွင် မွန်လူငယ်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ရေးအတတ်ပညာများကို သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
မွန်နှင့်ကရင် မဟာမိတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့ခြင်း
၁၉၄၈-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် အင်းစိန်မြို့  ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေ-အဲန်-ယူ)မှ ဥက္ကဋ္ဌ စောဘဦးကြီး နှင့် အမှုဆောင်များ ဖြစ်ကြသော စောသာဒင်၊ ဆရာသာထို၊ ဦးဇန်၊ မန်းဂျိမ်း (စ) စောဘယ်လိ၊ စောစံကေ၊ မန်းဘဇံတို့ နှင့် မွန်လူမျိုးရေးရာအဖွဲ့ချုပ်မှ ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်လှမောင်၊ နိုင်ဘလွင်တို့သည် မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ် ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် ပူးတွဲတိုက်ပွဲဝင်ရန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြပြီး အဓိဋ္ဌာန်ပြုချက် (၄) ချက်ကို ချမှတ်ခဲ့ကြသည်။ အဓိဌာန်ပြုချက်များတွင် ကရင်အမျိုးသားများကိုယ်စား ဥက္ကဋ္ဌကြီး စောဘဦးကြီးက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး မွန်အမျိုးသားများကိုယ်စား ဥက္ကဋ္ဌကြီး နိုင်လှမောင်က လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။ ၄င်းအဓိဌာန်ပြုချက် (၄) ချက်မှာ -
(၁) မွန်ပြည်နယ် နှင့် ကရင်ပြည်နယ် ရရှိရေးအတွက် မွန်နှင့်ကရင်တို့ ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းကြမည်။
(၂) ထိုသို့ တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် အသက်ကို ပဓာနမထားပဲ အောင်ပွဲရသည်အထိ ဆက်လက်တိုက်ပွဲ ဝင်သွားမည်။
(၃) တစ်ဦး သဘောမတူပဲ အခြားအင်အားစုနှင့် သဘောတူညီမှု မယူရ။
(၄) ကြိုးပမ်းမှု အောင်မြင်သည့်အခါတွင် မွန်လူထု၊ ကရင်လူထုတို့၏ ဆန္ဒအလျောက် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
အထက်ပါ အဓိဌာန်ပြုချက် (၄) ချက်ကို ရန်ကုန်မြို့ထုတ် သတင်းစာ အသီးသီး နှင့် ကရင်အမျိုးသားတို့၏ ကြွေးကြော်သံသတင်းစာ ဖြစ်သော သုဝဏ္ဏတိုင်း၊ မွန်အမျိုးသားတို့၏ ကြွေးကြော်သံသတင်းစာဖြစ်သော တနင်္သာရီတိုင်း သတင်းစာတို့တွင် တိုင်းသိပြည်သိ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
အဓိဌာန်ပြုချက် ထွက်လာပြီး မရှေးမနှောင်းမှာပင် မွန်ဒေသကျေးရွာများမှ ကာကွယ်ရေးလက်နက်များကို အစိုးရ၏အမိန့်အရ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းတော့သည်။ မွန်လူငယ်များသည် လာမည့်အန္တရာယ်ကို ခန့်မှန်းမိကြပြီး ဖြစ်၍ လက်နက်များကို ပြန်လည်မပေးအပ်ရန် ကျေးရွာများတွင် လှုံ့ ဆော်ကြသည်။ ၁၃၁၀-ခုနှစ်၊ ဝါခေါင် လပြည့်နေ့ (၁၉၄၈-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ-၁၉ ရက်) ဖားအံမြို့ နယ် ဇာသပြင်ရွာမှ စတင်၍ ကျေးရွာကာကွယ်ရေး လက်နက်များကို စတင်သိမ်းဆည်းလာရာမှ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းတွင် လက်နက်ပေါင်း(၂၀၀)ကျော် ရရှိခဲ့သည်။ ဖားအံမြို့ နယ်တွင် မွန်နှင့်ကရင်တို့ ပူးပေါင်းပြီး လက်နက်များကို သိမ်းဆည်းခဲ့ရာ လက်နက်ပေါင်း (၅၀၀) ကျော် ရရှိခဲ့သည်။
ယင်းသို့အရေး ပေါ်လာပြီးနောက် ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရသည် နိုင်ဘလွင်၊ မွန်စံသူ၊ နိုင်စိန်ထွန်း၊ နိုင်ဖိုးကောင်း တို့ အပါအဝင် မွန်ခေါင်းဆောင် (၂၀) ကျော်တို့ကို ဖမ်းဆီးပြီး မော်လမြိုင်ထောင်တွင် အကျဉ်းချ ထားလိုက်လေသည်။ မွန်ခေါင်းဆောင်များ ဖမ်းဆီးခံခြင်းကြောင့် မွန်နှင့် ကရင်တို့ ပူးပေါင်း၍ သထုံခရိုင်နှင့် မော်လမြိုင်ခရိုင်ကို သိမ်းယူလိုက်ကြသည်။ ထိုစဉ်က မော်လမြိုင် ဆိပ်ကမ်းအနီး မြစ်လယ်တွင် ဆိုက်ကပ်ထားသော မေယုစစ်သဘောင်္မှ ခြောက်လှန့် ၍ အမြောက်နှင့် စက်သေနတ်များ ပြစ်ဖောက်ခဲ့သည်။ စစ်သဘောင်္မှ အမြောက်လက်နက်များဖြင့် မုဒုံမြို့ ကို ပြန်လည်သိမ်းယူရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျိုက်မရောမြို့ ပေါ်မှလည်း ခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြသည်။
ဤသို့ အခြေအနေ ရှုပ်ထွေးလာသောအခါ ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရသည် မြန်မာ့အသံလွှင့်ဌာနမှ မွန်ကရင် နှင့် ရခိုင်ဒေသန္တရ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တစ်ရပ် ဖွင့်လှစ်ပေးမည်။ မွန်၊ ကရင်၊ ရခိုင်၊ ဗမာ နှင့် အခြားလူမျိုးစုကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်စေမည်ဟု ကြေညာခဲ့လေသည်။ ကေ-အဲန်-ယူ ဥက္ကဋ္ဌကြီး စောဘဦးကြီးသည်လည်း အစိုးရ၏ တိုက်တွန်းချက်ဖြင့် မွန်ကရင်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန် လေယာဉ်ဖြင့် မော်လမြိုင်မြို့ သို့ရောက်လာသည်။ အစိုးရဖွဲ့ပေးသော ကော်မရှင်တွင် ပါဝင်မည်ဟု ဆွေးနွေးသဘောတူပြီးနောက် မော်လမြိုင်ခရိုင်ကို ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ သထုံခရိုင်ကိုမူ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ကြသည်။
မွန်ပြည်နယ် နှင့် ကရင်ပြည်နယ် တရားဝင်တောင်းဆိုချက်
၁၉၄၈- ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်သော စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးတွင် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကေ-အဲန်-ယူမှ ကရင်ပြည်နယ်အဖြစ် တောင်ငူခရိုင် အပါအဝင် တနင်္သာရီတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ အင်းစိန် နှင့် သာယာဝတီခရိုင်၊ ညောင်လေးပင်နယ်တစ်ပိုင်းကို သတ်မှတ်ပေးရန် စာတမ်းတင်သွင်းလေသည်။ မွန်လူမျိုးရေးရာအဖွဲ့ချုပ် နှင့် မွန်တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံးမှ ပူးတွဲ၍ မွန်တို့၏ ဘိုးဘွားပိုင်နယ်မြေဖြစ်သော တနင်္သာရီတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းတို့ကို မွန်ပြည်နယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် စာတမ်းတင်သွင်းခဲ့သည်။ တောင်းဆိုချက်များတွင် တောင်းဆိုသည့်နယ်မြေ ထပ်နေသော်လည်း ကရင်အမျိုးသားတို့၏ တောင်းဆိုချက်ကို မွန်အမျိုးသားတို့က ထောက်ခံ၍ မွန်အမျိုးသားတို့၏ တောင်းဆိုချက်ကို ကရင်အမျိုးသားတို့က ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
(မှတ်ချက်။ ။စုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှ သုံးနှစ်ကျော်မျှ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက် ၁၉၅၃-ခုနှစ်တွင် မွန် နှင့် ရခိုင်တို့အတွက် အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ပြည်နယ်သတ်မှတ်မပေးပဲ ကရင်တို့အတွက် တောင်ငူခရိုင်တစိတ် တဒေသ၊ ဖာပွန်ခရိုင်၊ သထုံခရိုင် တစိတ်တဒေသနှင့် မော်လမြိုင်ခရိုင်တစိတ်တဒေသတို့ကို ကရင်ပြည်နယ် အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့လေသည်။)
လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေ ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာခဲ့သည်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ နု-အက်တလီစာချုပ်သည် တိုင်းပြည်ကို ရာသက်ပန် ကျွန်ပြုဖို့ ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်ဖြစ်၍ အမျိုးသား ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေသည်။ နိုင်ငံရေးအရ လွတ်လပ်သည် ဆိုသော်ငြားလည်း ကိုလိုနီစီးပွားရေးစနစ် အတွင်းတွင်ပင် ရှိနေသေးသည်ဖြစ်၍ အတုအယောင် လွတ်လပ်ရေးသာ ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးအရပါ လွတ်လပ်အောင် ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရဦးမည်။ ဗမာဓနရှင်မြေရှင်တို့သည် ပြည်သူတို့၏ဆန္ဒကို ကျောခိုင်းပြီး နယ်ချဲ့သမားနှင့် ပြန်မလာစတမ်း ပူးပေါင်းသွားကြပြီ ဖြစ်၍ နယ်ချဲ့စနစ်နှင့် ပဒေသရာဇ်စနစ်ကို ကိုယ်စားပြုသူများ နှင့် ၄င်းတို့၏ ကြံရာပါများကို ဆက်လက်တိုက်ရမည်။ ယနေ့ နိုင်ငံတကာအခြေအနေသည် အမျိုးသားလွတ်မြောက်မှု တိုက်ပွဲဆင်နွှဲရန်အတွက် အခြေအနေပေးနေသည်။ လွတ်လပ်မှုနှင့် ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတို့ကို ချုပ်ချယ်သော နယ်ချဲ့လက်ကိုင်တုတ် ဦးနုအစိုးရကို ဖြုတ်ချပြီး ပြည်သူ့အစိုးရ ထူထောင်ရန် ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲကို ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရန် လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရနှင့် စေ့စပ်၍ မရတော့သဖြင့် ၁၉၄၈၊ မတ်လ(၂၈) ရက်နေ့တွင် လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲကို စတင်ဆင်နွှဲလေတော့သည်။ ၄င်းတို့၏ လေ့ကျင့်ပြီးသား တပ်နီအင်အားမှာ တစ်သိန်း (၁၀၀၀၀၀) နီးပါးရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကျဆုံးပြီးနောက် ပြည်သူ့ရဲဘော်အဖွဲ့ကို ဆိုရှယ်လစ်ပါတီနှင့် ပူးပေါင်းရန် ဖ-ဆ-ပ-လ ခေါင်းဆောင်များက ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ ပြည်သူ့ရဲဘော်အဖွဲ့ဝင်များကို ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွင် ပြန်လည်နေရာချထားပေးရန် ဖြစ်သည်။
ပြည်သူ့ရဲဘော်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များက လက်ဝဲအင်အားစု ညီညွတ်ရေးဖြစ်မြောက်အောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ မအောင်မြင်ခဲ့ချေ။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲပြီးနောက် (၄) လ အကြာ ဇူလိုင် (၂၉) ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ဖိုးကွန်း၊ ဗိုလ်လရောင်တို့ ခေါင်းဆောင်သော ပြည်သူ့ရဲဘော်တို့သည် လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲကို စတင်ကြလေသည်။ တော်လှန်သော ပြည်သူ့ရဲဘော်အင်အားမှာ ခြောက်သောင်းမှ ခုနစ်သောင်းအထိ ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့ကြလေသည်။
အလံနီကွန်မြူနစ်ပါတီမှာ ၁၉၄၇-ခုနှစ်ကတည်းကပင် မြေအောက်ရောက်နေပြီ ဖြစ်သည်။ အလံနီကွန်မြူနစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင် အများအပြားမှာလည်း ထောင်သွင်း အကျဉ်းချထားခြင်း ခံနေရသည်။
၁၉၄၈-ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် မွန်ခေါင်းဆောင်များအား ချောင်းမြောင်းသတ်ဖြတ်ခြင်း (သာဓကတစ်ခုမှာ မွန်စံသူသည် မော်လမြိုင်မြို့၊ မြို့လယ်ခေါင် ကြေးနန်းပို့တိုက်အနီးတွင် ယူနီဖောင်းဝတ်များ၏ စတင်းဂန်း သေနတ်များဖြင့် ပစ်သတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။) မွန်သံဃာတော်များအား ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ မွန်ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများအား အကြောင်းမဲ့ နှိပ်စက်ကလူပြုမူခြင်းတို့ တစထက်တစ များပြားလာသည်။ မွန်လူထုများမှလည်း မိမိတို့၏ လွတ်လပ်မှုနှင့် ဒီမိုဒရေစီအခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ရန် ရရာလက်နက် စွဲကိုင်ကာ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ပြန်လည်ခုခံကာကွယ်လာကြသည်။ အခြေအနေဆိုးရွားသည်ထက် ပိုမိုဆိုးရွား ယိုယွင်းလာနေသည်။ ဤသို့ ရှိစဉ် ၁၉၄၉-ခုနှစ်၊ ဇန္နာဝါရီ (၃၁) ရက်တွင် ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (KNDO) ကို၎င်း၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁) တွင် မွန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (MNDO) ကို၎င်း၊ ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရမှ မတရားအသင်း ကြေငြာလေတော့သည်။
၁၉၄၉-ခုနှစ်၊ ဇန္နာဝါရီလ (၃) ရက်နေ့တွင် ကေအင်ဒီအို နှင့် အမ်အင်ဒီအိုတို့သည် အင်းစိန်မြို့ကို စတင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီး မင်္ဂလာဒုံလေယာဉ်ကွင်းမှ လက်နက်တိုက်ကို သိမ်းပိုက် ဖွင့်ယူလိုက်ကြတော့သည်။ (အင်စိန်မြို့ကုို သိမ်းပိုက်စဉ်က အမ်အင်ဒီအိုတပ်ခွဲတစ်ခွဲ ပါဝင်ခဲ့သည်။)
ထိုစဉ်က ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရအား တော်လှန်တိုက်ခိုက်နေသော အင်အားစုများမှာ အလွန်အားကောင်း နေချိန်ဖြစ်သဖြင့် နေရာအနှံ့အပြားတွင် အချက်အချာကျသော မြို့ငယ်များနှင့် တောပိုင်းဒေသအတ်ာများများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံခြားအသံလွှင့်ဌာနများနှင့် သတင်းစာများကပင် ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရအား ရန်ကုန်အစိုးရဟူ၍ပင် သမုဒ်ကြလေသည်။ ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကပင်လျှင် ‘နိုင်ငံတော်၌ အန္တရာယ်ကျရောက် နေပြီ’ ဟု ကြေငြာခဲ့ရလေသည်။ တော်လှန်ရေးအင်အားစုများ၏ လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရသည် ကြီးမာသော၊ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အကြပ်အတည်းတို့ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေသည်။
တော်လှန်ရေးအင်အားစုများသည် ဝါဒရေးရာအယူအဆ ကွဲပြားမှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဂိုဏ်းဂဏအစွဲအလန်း ကြီးမားမှုကြောင့် လည်းကောင်း၊ ဘုံရန်သူ အစိုးရအား ပြုတ်ကျအောင် ပူးပေါင်းဆက်စပ်တိုက်ပွဲ မဝင်နိုင်ခဲ့ပေ။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ အလံနီကွန်မြူနစ်ပါတီ နှင့် ပြည်သူ့ရဲဘော်အဖွဲ့တို့သည် (၃) ပါတီ ညီညွတ်ရေး တပ်ပေါင်းစုကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသော်လည်း အယူအဆရေးရာ ကွဲလွဲချက်များကြောင့် ကြာရှည်မခံခဲ့ပေ။
တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် တပ်မ (၄) ၏ တိုက်ထုတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး ၁၉၅၀-ခုနှစ်၊ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် ယူနန်ပြည်နယ် မှတဆင့် မြန်မာပြည်ဖက်သို့ ဆုတ်ခွာလာသော ဗိုလ်ချုပ်လီမိဦးဆောင်သော ကေအမ်တီ (တရုတ်ဖြူ) အင်အားနှစ်ထောင်နှင့် ၄င်းတို့၏ မိသားစုတို့သည် ရှမ်းပြည်ကျိုင်းတုံဒေသတွင် စခန်းချ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ၄င်းတို့ ရောက်ရှိနေထိုင်သောဒေသမှ ဆန်ကိုရသည့်နည်းဖြင့်ရှာ၍ ဘိန်းကုန်ကူး၊ အကောက်အခွန်ယူကာ ရပ်တည်နေခဲ့ကြသည်။ ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရတပ်များသည် တော်လှန်ရေး အင်အားစုများကို နှိမ်နှင်းတိုက်ခိုက် နေရသဖြင့် ၄င်းတို့အား အပြီးတိုင် တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ခြေ။
၁၉၅၂-ခုနှစ် နောက်ပိုင်းသို့ ရောက်လာသောအခါ စားသောက်နေထိုင်ရေး အခက်အခဲများကို အကြောင်းပြု၍ တနသာင်္ရီတိုင်းဖက်သို့ မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်ရအောင် ဝိုင်းတိုက်ပေးမည်ဟုဆိုကာ မော်လမြိုင်ခရိုင်အထိ အချို့ တဝက် ဆင်းလာကြသည်။ သို့သော် မယ်မယ်ရရ တိုက်ပွဲဆင်ခြင်းမရှိပဲ ဆန်ရရေးနှင့် ဘိန်းကုန်ကူးရေးကိုသာ အဓိကထား လှုပ်ရှားနေခဲ့ကြသည်။
ဖဆပလ အစိုးရအဖွဲ့သည် တော်လှန်ရေးအင်အားစုများ ညီညွတ်မှု မရှိခြင်းကို ချက်ကောင်းယူကာ တစ်နှစ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး အရယူပေးမည်ဟူသော ကြွေးကြော်သံဖြင့် မိမိအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေကို တဖြည်းဖြည်း ကျယ်ပြန့်လာအောင် ထိုးစစ်ဆင်လာတော့သည်။ သြဇာတိက္ကမ ရှိသော သံဃာတော်များ၏ ထောက်ခံမှုကို ရရှိစေရန် ဆဌသံဃာယနာ တင်ပွဲကို ငွေကုန်ကြေးကျ အမြောက်အများခံကာ ပြုလုပ်ခဲ့လေသည်။ အမေရိကန်၏ စီးပွားရေး အကူအညီပေးရေးစီမံကိန်း ဖြစ်သော အီး-စီ-အေ အကူအညီဖြင့် ကေ-တီ-အေ ကုမ္ပဏီ၏ အစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံကာ ပြည်တော်သာစီမံကိန်းဟူသော ကြွေးကြော်သံဖြင့် ပြုပြင်ရေး လုပ်ငန်းများကို စတင်အကောင်အထည် ဖော်လုပ်ဆောင်လာသည်။ ဤသို့ဖြင့် ပြည်သူလူထုကြီး တစ်ရပ်လုံးသည် ဖ-ဆ-ပ-လ ၏ နည်းပရိယာယ် ကြွယ်ကြွယ်ဖြင့် လှည့်စားမှိုင်းတိုက်မှု ခံခဲ့ကြရတော့သည်။
မွန်အမျိုးသားများသည် ဥပဒေတွင်း တိုက်ပွဲဝင် ခဲ့ကြစဉ်ကပင် ပြည်နယ်တောင်းဆိုချက်ခြင်း တူညီနေစေကာမူ မွန်လူမျိုးရေးရာအဖွဲ့ချုပ် နှင့် မွန်တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံးဟူ၍ အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခု ရှိလာခဲ့ပေရာ လက်နက် ကိုင်တိုက်ပွဲသို့ ကူးပြောင်းသောအခါတွင်လည်း ဂိုဏ်းဂဏ စိတ်ကင်းစင်ခြင်း မရှိကြသေးပေ။ တနယ်၊ တဗိုလ်၊ တမင်း သဘောသက်ရောက်လျှက် ရှိခဲ့သည်။ မျိုးချစ်စိတ်ကိုသာ ရှေ့တန်းတင်ထား၍၊ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်များမှာ မှေးမှိန်နေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၂-ခုနှစ်၊ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် နိုင်အောင်ထွန်း၊ နိုင်ချမ်းမွန်၊ နိုင်ဆိတ်နို့၊ နိုင်ထွန်းမောင်၊ နိုင်ထွန်းသိမ်း၊ နိုင်ငွေသိမ်း၊ မိဟံသာ၊ နိုင်စိန်ထွန်း တို့သည် မွန်တော်လှန်ရေး ဆက်ဆံရေးဗဟိုဌာန တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ရန် သဘောတူညီချက်ကို ရရှိကြသည်။ သို့သော် ၄င်းဗဟိုဌာနသည် ရုပ်ပြမျှသာဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒေသတိုင်းသို့ သြဇာသက်ရောက်မှု မရှိခဲ့ပေ။
၁၉၄၉-ခုနှစ်မှ ၁၉၅၂-ထိ ကရင်ခေါင်းဆောင်စောဖိုးချစ်၊ စောသာဒင်တို့နှင့်အတူ မော်လမြိုင်၊ မန္တလေး၊ ရွှေဘိုထောင်များတွင် သုံးနှစ်မျှ အထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသော နိုင်ဘလွင်သည် ထောင်မှလွတ်လာခဲ့ပြီး၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် တစ်နှစ်ကျော် ခြေချုပ်ချထားခံရပြန်သည်။ ထို့နောက် ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ကတိုးမှ ရေလမ်းခရီးဖြင့် တော်လှန်ရေးနယ်မြေသို့ ရောက်လာသည်။
ထိုစဉ်က မွန်တို့သည် မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ သံဖြူဇရပ် နှင့် ရေးမြို့ ကြားရှိ နယ်မြေကို ပင်လယ်ကမ်းခြေအထိ ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။ ကေ-အမ်-တီ တပ်များ ရောက်လာသည်ကို အကြောင်းပြပြီး ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရမှ ထိုနယ်မြေကို ထိုးစစ်ဆင်တော့သည်။ ကေ-အမ်-တီ တပ်များသည် အနည်းငယ်မျှသာ ခုခံပြီး ဆုတ်ခွာပေး လိုက်ကြသည်။ အစိုးရတပ်များ၏ ထိုးစစ်ကြောင့် မွန်ကျေးရွာများ နှင့် မွန်စာပေကျမ်းဂန်များ နောက်ဆုံးမှီ ကိန်းအောင်းရာ ဖြစ်သော ဘာသာ၊ သာသနာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရသည်။ မွန်တို့ ထိန်းချုပ်ထားသော နယ်မြေသည်လည်း ကျုံ့ဝင်သွားရတော့သည်။
၁၉၅၃-ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် အစိုးရ၏ ထိုးစစ်များကြားမှပင် မော်လမြိုင်ခရိုင်နှင့် သထုံခရိုင်မှ မွန်ခေါင်းဆောင်များသည် ကျိုက္ခမီမြို့နယ် (ယခုသံဖြူဇရပ်မြို့ နယ်) ဝဲခမိကျေးရွာအနီး စခန်းတနေရာတွင် ဂိုဏ်းဂဏဖြစ်မှုများ ကင်းစင်ရှင်းလင်းသွားစေရန် ရင်ဖွင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြပြီး မွန်တော်လှန်ရေးကို စနစ်တကျ ရှေ့ဆောင် သွားနိုင်ရန် “မွန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစု” ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီး ဗဟိုကော်မတီများကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် နိုင်အောင်ထွန်း၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ထွန်းမောင်၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနိုင် ထွန်းသိမ်း၊ ကာကွယ်ရေး၊ စည်းရုံးရေးနှင့် ဝါဒဖြန့်ချိရေးမှူး နိုင်ရွှေကျင်တို့ ဖြစ်ကြပြီး ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှာ နိုင်ငွေသိန်း၊ နိုင်ပန်းသာ၊ နိုင်ဆိတ်နို့၊ နိုင်အောင်တင် တို့ ဖြစ်ကြသည်။ (နိုင်ဘလွင်မှာ တော်လှန်ရေးနယ်မြေသို့ ရောက်သောအခါ နိုင်ရွှေကျင်ဟု အမည်ပြောင်းထားသည်။)
ဗဟိုကော်မတီအစည်းဝေးမှ မွန်တော်လှန်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီး အခြေခံမူဝါဒလမ်းစဉ်ကို ပြည်တွင်းပြည်ပသို့ ကြေငြာရန် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ မွန်တော်လှန်ရေး အင်အားစုများအားလုံး တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအောက်တွင် လှုပ်ရှားသွားရန်ကိုလည်း ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြသည်။ လက်လှမ်းမှီရာ ဒေသတိုင်းတွင် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးတို့ကို စနစ်တကျ တိုးတက်ကြီးထွားလာစေရန် ပြန်လည်စည်းရုံးရေးလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ဖာပွန်မြို့ ပေါ်ရှိ မဟာမိတ်ကော်သူလေးဌာနချုပ်သို့ ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန် နိုင်ရွှေကျင်ခေါင်းဆောင်သော မိတ်ဆက်အဖွဲ့ စေလွှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
၁၉၅၄- နှစ်ဦးပိုင်းတွင် မွန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစုကို ဖျက်သိမ်းပြီး မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦးကို ထူထောင် လိုက်သည်။ မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦး၏ ရှေ့ဆောင်မှုဖြင့် မွန်တော်လှန်ရေးအင်အားစု များစုစည်းညီညွတ်လာသည်ကို မွန်လူထုတစ်ရပ်လုံးက ကောင်းချီးသြဘာ ပေးကြသည်။ တတ်နိုင်သည့်ဖက်မှ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ကြသည်။ မွန်တော်လှန်ရေး အခြေအနေသည် နိုင်ငံရေးအသွင် ပိုဆောင်လာပြီး စစ်ရေးအရလည်း ပိုမိုလှုပ်ရှားနိုင်လာသည်။
ဥပဒေတွင်း မွန်လူထုကြီး မွန်ပြည်နယ်ရရှိရေး တောင်းဆိုချက်သည်လည်း ပိုမို အသံကျယ်လောင်လာတော့သည်။ မွန်တို့၏ တော်လှန်ထကြွမှုကို လက်နက်အင်အားသုံးပြီး မတားဆီးနိုင်တော့သည့်အဆုံးတွင် ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရသည် တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ရရှိရေးအခြေခံမူပေါ်တွင် သွေးစည်းညီညွတ်စွာ တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်လာကြသော မွန်ပြည်သူတရပ်လုံးအား ပြိုကွဲတွေဝေသွားစေရန် မွန်ယဉ်ကျေးမှု ပြပွဲပြိုင်ပွဲများ ခင်းကျင်းပြသစေခြင်း၊ အနှစ်သာရမရှိသော မွန်ရေးရာဌာနကို ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ လက်ပါးစေမွန်အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် မှိုင်းတိုက်ခဲ့ပေသည်။
၁၉၅၄-ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း ကေအမ်တီ (တရုတ်ဖြူ) တပ်များသည် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ နယ်စပ်မြို့ဖြစ်သော မြဝတီမြို့မှတစ်ဆင့် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းသို့ ပြန်ကြသည်။ ၄င်းတို့ ပြန်သွားပြီးနောက် မွန်ပြည်သူတပ်ဦးအတွင်းတွင် ပြည်ပမဟာမိတ် သတ်မှတ်ရေးနှင့် ပါတ်သက်၍ အယူအဆ ကွဲပြားခဲ့ကြသည်။ ရဲဘော်စိတ် အပြည့်အဝဖြင့် စိတ်ရှည်လက်ရှည် ညှိနှိုင်းခဲ့ကြသဖြင့် တွေ့ကြုံနေရသော အကြပ်အတည်းကို ကျော်လွန်နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၆-ခု နှစ်ဦးပိုင်းတွင် အဓိကဘုံရန်သူကို ဖယ်ရှားထိုးနှက်ဖယ်ပစ်ရန် ပြည်တွင်းတော်လှန်ရေး အင်အားစုများ၏ တော်လှန်ရေး တပ်ပေါင်းစုတရပ် လိုအပ်သည်ဟူသော သဘောတူညီချက်ကို ရရှိကြလေသည်။
အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ ၁၉၅၇-ခုနှစ်၊ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ကေအင်ယူပါတီ နှင့် မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦး သုံးဖွဲ့ပါဝင်သော ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲတရပ်ကို ပဲခူးရိုးမတောင်ခြေ၊ စိမ်းသာယာစခန်းတွင် ပြုလုပ်ပြီး သုံးဖွဲ့ပူးတွဲ ဗဟိုကော်မတီတရပ်ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ သခင်ဇင်၊ ရဲဘော်မြ နှင့် ဗိုလ်ညွန့်မောင်၊ ကေအဲန်ယူဗဟိုမှ စောမျိုးသွေး၊ ဗိုလ်သန်းအောင် နှင့် မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦးမှ နိုင်ရွှေကျင်၊ နိုင်အုန်းလှိုင် တို့က မိမိတို့ သက်ဆိုင်ရာဗဟိုကော်မတီ ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ သုံးဖွဲ့ ပူးတွဲဗဟိုကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် အပြန်အလှန် ကြီးကြပ်ရေး၊ အပြန်အလှန် အကူညီပေးရေးမူအရ ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရအား နိုင်ငံရေးအရရော စစ်ရေးအရပါ ထိုးနှက် တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့သည်။
သုံးဖွဲ့ ပူးတွဲဗဟိုကော်မတီသည် တန်းတူရည်တူ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး သူမနာကိုယ်မနာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်း ရေးကို ရယူနိုင်ရန် ဥပဒေတွင်း ဥပဒေပြင်ပ ပြည်သူလူထုကြီးအား ဆက်စပ်လှုပ်ရှားလာနိုင်စေရန် စွမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့သည်။ မွန်တို့၏ မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်တွင် နှစ်စဉ် ကျင်းပပြုလုပ်သော သာသနာ ၂၅၀၀ ပွဲတော်နှင့် တဆက်တည်း မွန်ပြည်နယ် ဖော်ထုတ်ပေးရေး လူထုဆန္ဒပြပွဲကြီးများကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဥပဒေတွင်း အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ဖြစ်သော ပ-မ-ည-တ သည်လည်း သွေးမြေကျခံ၍ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၊ ပြည်သူတို့၏ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများ ပြန်လည်ပေးရေး၊ လူမျိုးစုများ၏ အခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝ ပေးရေးတို့ပေါ်တွင် အခြေခံသည့် လူထုဆန္ဒပြပွဲများကို တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြား ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လူငယ်၊ ကျောင်းသား၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားတို့သည် ၄င်းဆန္ဒပြပွဲများတွင် မိမိတို့၏ နစ်နာချက်များကို ဖော်ထုတ် တောင်းဆိုသည့် ကြွေးကြော်သံများ ပိုစတာများဖြင့် အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
အခြေအနေ ယင်းကဲ့သို့ ရှိနေစဉ် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ ရဲဘော်ချမ်းအေးသည် ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ (၂၀) ကြိမ်မြောက်ကွန်ဂရက်မှ ချမှတ်သော “လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဖြင့်သာ မဟုတ်ပဲ၊ ဥပဒေတွင်း ပါလီမာန်တိုက်ပွဲဖြင့်လည်း ဆိုရှယ်လစ်စနစ်သို့ ကူးပြောင်းနိုင်သည်” ဟူသော အယူအဆကို ကိုင်ဆောင်ကာ လက်နက်ချလိုက်သည်။ ၄င်းရေးသော စာတမ်းတစ်စောင်တွင် “လက်နက်နှင့်ဒီမိုကရေစီ လဲရေး” ကြွေးကြော်သံဖြင့် လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲကို ရပ်ဆိုင်းပြီး၊ ဥပဒေဘောင်တွင်း ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ ဝင်ကြရန် လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းထားလေသည်။ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ ဝင်နေသော ပြည်သူ့ရဲဘော် အဖွဲ့အတွင်းတွင် ဤအယူအဆကို လက်ခံသူ တနေ့တခြား များပြားလာသည်။ ဤလှုံ့ဆော်ချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရသည် “လက်နက်ချ” အသုံးအနှုံးအစား စကားလုံးလှအောင် ရွေးချယ်ကာ “ဒီမိုကရေစီဘောင်အတွင်း အလင်းဝင်ပြီး မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဝါဒလမ်းစဉ်ကို ပြည်သူလူထုအား တင်ပြကြပါ” ဟု ဝါဒဖြန့်ခဲ့လေသည်။
ဤဝါဒဖြန့်မှုကြောင့်ပင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့သော ပအိုဝ့်အမျိုးသား ဦးလှဖေ ခေါင်းဆောင်သော ပအိုဝ့်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်သည် တိုက်ပွဲအသွင်ပြောင်းပြီး တစ်ဖွဲ့လုံး ဥပဒေဘောင်တွင်း ဝင်ခဲ့ကြလေသည်။
နိုင်ငံအဝှမ်း ပြည်သူလူထုကြီးက တခဲနက် အုံကြွဆန္ဒပြလာမှုကြောင့် ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားအတွင်း ကြီးမားစွာ ဂယက်ရိုက်ခတ်လာခဲ့သည်။ နယ်ချဲ့သမားထံမှ အကူအညီယူ၍ ပြည်တွင်းစစ်ကို အပြုတ်တိုက်လိုသူများ နှင့် ပြည်တွင်းစစ်ကို တနည်းနည်းဖြင့် ရပ်စဲလိုသူများ၊ ပြည်သူတို့၏ ဒီမိုကရေစီအခွင့် အရေးများကို ချုပ်ချယ်လိုသူများနှင့် ပိတ်ပင်ထားလိုသူများဟူ၍ သဘောထားကွဲလာသည်။ ပြေလည်အောင် ညှိနှိုင်း၍ မရနိုင်တော့သည့်အဆုံး ၁၉၅၈-ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ဆယ်နှစ်ဆယ်မိုး အာဏာရလာခဲ့သော ဖ-ဆ-ပ-လ အဖွဲ့သည် နှစ်ခြမ်းကွဲသွားလေတော့သည်။ ပြည်တွင်းစစ်ကို တနည်းနည်းဖြင့် ရပ်စဲလိုသော ဦးနု၊ သခင်တင်၊ ဦးအေးမောင်၊ သခင်ကျော်ထွန်း တို့ ဦးဆောင်သောအခြမ်းကို သန့်ရှင်း ဖ-ဆ-ပ-လ ဟု အမည်ပေးကြသည်။ ပြည်တွင်းစစ်ကို အပြုတ်တိုက်လိုသူများ ဖြစ်ကြသော ဦးဗဆွေ၊ ဦးကျော်ငြိမ်း တို့ခေါင်းဆောင်သော အခြမ်းကို တည်မြဲ ဖ-ဆ-ပ-လ ဟု အမည် ပေးကြသည်။ ၁၉၅၈-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ပါလီမာန်တွင် ဤနှစ်ဖွဲ့အနက်မှ အစိုးရ တက်လုပ်ရန် မဲခွဲကြသောအခါ ဖ-ဆ-ပ-လ အမတ်ချည်းသာ ဆိုလျှင် သန့်ရှင်း ဖ-ဆ-ပ-လ ရှုံးမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အတိုက်အခံ ပ-မ-ည-တ အမတ်များနှင့် ဦးကျော်မင်း ခေါင်းဆောင်သော ရခိုင်အမတ်များက မဲပေးကြသဖြင့် ဦးနု ခေါင်းဆောင်သော သန့်ရှင်း ဖ-ဆ-ပ-လ မှပင် အနိုင်ရ၍ အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့လေသည်။ သန့်ရှင်း ဖ-ဆ-ပ-လ ၏ ပျော့ပြောင်းသော အယူအဆပေါ်တွင် ပ-မ-ည-တ မှ ထောက်ခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဖော်ထုတ်ပေးမည်ဟု ဦးနု ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လက်မှတ်ရေးထိုး ကတိပြုသောကြောင့် ရခိုင်အမတ်များက ထောက်ခံခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်လေသည်။
သန်းရှင်း ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရ တက်လာသောအခါ ဒီမိုကရေစီ အာမခံချက် ပြည့်စုံခိုင်လုံမှုလည်း မရှိသော၊ တွေ့ဆုံစေ့စပ်ဆွေးနွေးခြင်းလည်း မရှိသော၊ အပေါ်စီးယူထားသည့် ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေးမူကို ကြေငြာခဲ့လေသည်။ မွန်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် နှင့်ပတ်သက်၍ အကယ်၍ မွန်လူထု၊ ရခိုင်လူထုတို့က အမှန်တကယ် ပြည်နယ်လိုလားကြလျှင် မိမိအနေနှင့် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနု က ကတိပြု ကြေငြာခဲ့လေသည်။
ဤသို့ အုပ်စိုးသူလူတန်းစားအချင်းချင်း ပဋိပက္ခဖြစ်၍ ကွဲပြဲနေခိုက်တွင် အဖိနှိပ်အချယ်လှယ်ခံနေရသော အင်အားစုများ တစုတစည်းတည်း တိုက်ပွဲဝင်ရမည့်အစား ၁၉၅၈-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် နိုင်အောင်ထွန်း၊ နိုင်ချမ်းမွန်၊ နိုင်ဆိတ်နို့၊ နိုင်အောင်တင်၊ နိုင်ဖိုးစိန်၊ နိုင်ငွေသိမ်း၊ နိုင်ထွန်းသိမ်း၊ နိုင်သိမ်းမောင် စသည့် မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦး ဗဟိုကော်မတီနှင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အများစုတို့သည် လက်နက်ချလိုက်ကြပြီး ဥပဒေတွင်း ရပ်တည်ခွင့်ကို ရယူလိုက်ကြလေသည်။ ထိုနှစ်သြဂုတ်လတွင် ပြည်သူ့ရဲဘော်အဖွဲ့မှလည်း အများစု လက်နက်ချခဲ့ကြသည်။ သုံးဖွဲ့ ပူးတွဲဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦး ဥပဒေတွင်း ဝင်သွားခဲ့ခြင်းဖြင့် ကျန်ကေအဲန်ယူပါတီနှင့် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှစ်ဖွဲ့တွင်း ဂယက်ရိုက်ခတ် စိတ်ဓါတ်ကျစေပြီး အများအပြား လက်နက်ချသွားကြစေသည်။
တော်လှန်ရေးတစ်ကွေ့တွင် ဤကဲ့သို့ ဖြစ်သွားခြင်းကြောင့် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူလူထုတိုက်ပွဲကြောင့် နီးကပ်လာနေသော ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရေးကို ရှည်ဝေးအားနည်းစေခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းဖောက်ပြန်ရေး သမားများအဖို့ ပြည်သူလူထုအပေါ် လုပ်ကြံရန် အခွင့်အလန်း သာစေခဲ့သည်။ သို့နှင့် ဆွေငြိမ်းတို့နှင့် အလိုတူအလိုပါ တပ်မှူးအချို့သည် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်ကာ ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီ အစိုးရအား စစ်တပ်ဖြင့် ခြမ်းခြောက်ဖြုတ်ချလျက် လွှတ်တော်ပြင်ပမှ ပုဂ္ဂိုလ်များသာ ပါဝင်သော ပထမ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းအစိုးရကို ၁၉၅၈-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည့် အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားစေတော့သည်။
မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦး ဥပဒေတွင်းဝင်စဉ်က သုံးဖွဲ့ပူးတွဲဗဟိုကော်မတီဌာနချုပ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦး ဗဟိုကော်မတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် နိုင်ရွှေကျင်သည် ဗဟိုကော်မတီနှင့် အယူအဆချင်း မတူညီသဖြင့် လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ ဆက်လက်ဆင်နွှဲရန် စိုင်းပြင်းခဲ့သည်။ မော်လမြိုင်ခရိုင်နှင့် သထုံခရိုင် လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲကို ထောက်ခံကြသော ရဲဘော်များအား ပြန်လည်စုစည်းပြီး မွန်တော်လှန်ရေးကို ရှေ့ဆောင်ရန် မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။
လက်နက်ကိုင် အင်အားစုများ ယာယီအင်အားလျော့ပါးလာသည်ကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ ဗိုလ်နေဝင်းစစ် အစိုးရသည် နှစ်နှစ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး အရယူပေးမည်ဟူသော ကြွေးကြော်သံဖြင့် တော်လှန်ရေးအင်အားစု များကို အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ရှမ်းအမျိုးသားများသည် တန်းတူရေး နှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို အရေးဆိုတိုက်ပွဲဝင် နေကြပြီဖြစ်သည်။ ရှမ်းအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပ်များလည်း အလျှိုလျှို ပေါ်လျှက်ရှိလာသည်။ ဗိုလ်နေဝင်း အစိုးရတပ်များသည် ရှမ်းအမျိုးသားများကို ပြင်းထန်စွာ ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ဥပဒေတွင်းတွင် စောခွန်ချိုခေါင်းဆောင်၍ ဥပဒေပတွင် စိုင်းထွန်းအေး၊ စဝ်စိုင်းပန်း၊ စိုင်းနာခမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်စောနွဲ့၊ ဗိုလ်မိုးဟိန်း၊ ဗိုလ်မောင်မောင်တို့က ခေါင်းဆောင်ကြသည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ဇော်ဆိုင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်တူး ညီအစ်ကိုတို့သည် တန်းတူရေး နှင့် ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်အတွက် စည်းရုံးနေကြသည်ကို ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းတပ်က လိုက်လံဖမ်းဆီးနှိမ်နှင်းနေခဲ့လေသည်။ အရှိန်ရလာသောအခါ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်သည် အင်အားတစ်သောင်းကျော်လာခဲ့သည်။
ဤသို့သော ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေအောက်တွင် ၁၉၅၉-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွင်း၌ ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ သခင်ဇင်၊ ရဲဘော်ဌေး၊ ဗိုလ်ရဲမောင်၊ ကေအဲန်ယူပါတီမှ မန်းဘဇံ၊ ဆရာသာမြိုင်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကော်ထူး၊ စောမျိုးသွေး နှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ နိုင်ရွှေကျင်တို့သည် ကေအဲန်ယူဌာနချုပ်စခန်းတွင် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစု (မ-ဒ-ည-တ) ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းနောက် များမကြာမီ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ နှင့် ချင်းဦးစီးအဖွဲ့တို့သည် မ-ဒ-ည-တ တွင် ပါဝင်လာကြသည်။ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးတံခွန်ကို စုစုစည်းစည်းမားမားမတ်မတ် ပြန်လည်လွှင့်ထူ နိုင်ခဲ့သဖြင့် တော်လှန်ရေးအင်အားစုများအတွင်းမှာ သာမက ပြည်သူလူထုအတွင်းမှာပါ အားတက်သရော ဖြစ်လာကြသည်။
ပြည်သူလူထုကြီးသည် အဖိနှိပ်ခံနေရသည့်ကြားမှ ရသမျှအခွင့်အရေးကို ယူကာ စစ်အာဏာရှင်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်ကြ၍ ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားရေးအတွက် တက်ကြွစွာ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဤဖြစ်ရပ်များကြောင့် စစ်တပ်တွင်းရှိ ပြည်သူ့ဘက်တော်သား တပ်မှူးတပ်သားတို့သည် အားတက်သရော ဖြစ်လာကာ စစ်အာဏာရှင်အစိုးရ စိုးမိုးရေးကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။ စစ်အစိုးရသည် ဤကဲ့သို့ အဖက်ဖက်မှ အကြပ်ကိုင် ခံရမှုကြောင့် အချိန်မဆွဲနိုင်တော့ပဲ အာဏာသိမ်းပြီး တစ်နှစ်နှင့်ခြောက်လအကြာတွင် ရွေးကောက် ပွဲကို ကျင်းပပေးခဲ့လေသည်။
မွန်တို့၏ အသက်၊ သွေး၊ ချွေးတို့ဖြင့် ရင်းနှီးတည်ဆောက်ခဲ့သော လွတ်မြောက်နယ်မြေများသည် မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို စတင်တည်ထောင်ချိန်တွင် မရှိသလောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။ ကျန်နယ်မြေများကို မဟာမိတ်ကော်သူးလေတပ်များ၏ ယာယီဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းပေးမှုဖြင့် မွန်တော်လှန်ရေးကို ဆက်လက်အသက်သွင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းအမျိုးမျိုးကြားမှ မွန်လူထု၏ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးလိုသော ဆန္ဒကြောင့်သာလျှင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီသည် ဆက်လက်ရပ်တည် တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
၁၉၆၀-ခုနှစ်၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အာဏာအသိမ်းခံရသော သန့်ရှင်း ဖ-ဆ-ပ-လ မှ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ အမည်ဖြင့် အရွေးခံသည်။ တည်မြဲက ဖ-ဆ-ပ-လ အမည်ဖြင့် အရွေးခံသည်။ ပ-မ-ည-တ မှလည်း အရွေးခံသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီတွင် မ-ဒ-ည-တ မှ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် သဘောထားကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ရာ၌ “ဖောက်ပြန်ရေးသမားများအား ဝိုင်းပယ်၍ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအား မဲဆန္ဒပေးကြရန်” လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် စစ်တပ်မှ အမျိုးမျိုး နှောက်ယှက် ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သော်လည်း ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့မှ မဲအပြတ်အသတ် နိုင်၍ အစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့သည်။ မွန်အမျိုးသားတို့သည် မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦး ဥပဒေဘောင်အတွင်း ဝင်ရောက်သွားသည်ကို မနှစ်မြို့ကြသော်လည်း ၁၉၄၇-ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို သင်ခန်းစာယူ၍ လွှတ်တော်တွင် မွန်ကိုယ်စားလှယ် ရရှိရေးအတွက် မဲပေးကြရာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ်များအဖြစ် နိုင်အောင်ထွန်း၊ မွန်ဦးဖိုချို၊ နိုင်ဖိုးစိန် တို့ အရွေးခံကြရပြီး၊ လူမျိုးစုလွှတ်တော် အမတ်အဖြစ် နိုင်အောင်လှငွေ အရွေးခံရသည်။
ပထစအစိုးရသည် ပြည်သူတို့၏ လိုအင်ဆန္ဒဖြစ်သော ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို လျှစ်လျူရှုခဲ့သဖြင့် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အတွင်းတွင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို ရယူလိုသူများနှင့် ပြည်တွင်းစစ်ကို အပြုတ်တိုက်လိုသူများ ဟူ၍ နှစ်ပိုင်းကွဲလာပြန်သည်။ ၁၉၆၂-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွင်းတွင် ပထစအဖွဲ့၏ ညီလာခံကို ကျင်းပခဲ့ရာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို ရယူလိုသူများဘက်မှ အနိုင်ရလေသည်။ အနိုင်ရသည့်ဘက်မှ အစိုးရတာဝန်ကို လွှဲပြောင်းမရယူနိုင်မီ ချက်ကောင်းစောင့်နေသောစစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်းနှင့် စစ်ဗိုလ်တစုတို့သည် တိုင်းပြည်၏ ယိုယွင်းလာသော အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းရန်ဟု အကြောင်းပြကာ ၁၉၆၂-ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂)ရက်နေ့တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီ အမည်ခံပြီး ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အာဏာသိမ်းယူလိုက်လေသည်။
ထိုစဉ်က လူမျိုးစုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ဖက်ဒရယ်မူ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပနေစဉ် ဖြစ်ရာ နောက်သုံးရက်အကြာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ဖော်ထုတ်ရေး ဥပဒေကြမ်းကုို အတည်ပြုရန် စီစဉ်ထားကြပြီးဖြစ်သည်။ မွန်အမတ်များက မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ သထုံခရိုင်နှင့် နီးစပ်ရာဒေသများကို မွန်ပြည်နယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် မွန်ပြည်နယ် ဖော်ထုတ်ရေးကော်မတီကို တင်ပြသည်။ သို့သော် မွန်ပြည်နယ်ကိစ္စမှာ ပထမအချို့အမတ်များ၏ ကန့်ကွက်မှုကြောင့် မတင်မကျ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ကချင်၊ ကယား၊ ချင်း၊ ရှမ်း လူမျိုးစုများကလည်း ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် အပြည့်အဝရရှိရေးအတွက် လွှတ်တော်တွင် အဆိုတင်သွင်းရန် စိုင်းပြင်းနေကြစဉ် အာဏာသိမ်းခြင်းသည် လူမျိုးစုများ၏ အုံကြွလာမှုကို လှီးလွှဲလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
အာဏာသိမ်းသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများအားလုံးတို့အား ထိန်းသိမ်းလိုက်သည်။ ပါလီမန်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းလိုိက်သည်။ တရားလွှတ်တော်ချုပ၊် တရားရေးဝန်ကြီးများကို နှုတ်ထွက်စေပြီး အသစ်ပြန်ခန့်သည်။ ကျောင်းသားများက ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြသည်ကို ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ပြီး တက္ကသိုလ် နှင့် ကောလိပ်ကျောင်းများကို ပိတ်လိုက်သည်။ သို့ဖြင့် နိုင်ငံတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဟန့်တား၍ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ထူထောင်လိုက်လေသည်။ တဆက်တည်းတွင် နိုင်ငံခြားသားပိုင်၊ အမျိုးသားပိုင် ဟူ၍ မခွဲခြားတော့ဘဲ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအရပ်ရပ်ကို စစ်တပ်မှ လက်ဝါးကြီးအုပ်ရန် ပြည်သူပိုင်အဖြစ် သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီး နိုင်ငံတော် အရင်းရှင်စနစ်ကို ထူထောင်လိုက်လေသည်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို လူမျိုးစုံပြည်သူတို့သည် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည်။ အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို တကယ်လိုလားလေဟန် ပြုရန်အတွက် ၁၉၆၃-ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် စစ်အစိုးရမှ တော်လှန်ရေး အင်အားစုအားလုံးတို့အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ မ-ဒ-ည-တ အဖွဲ့အစည်းများကို သီးခြားစီ တွေ့ဆုံပြီး ပြန်လွှတ်သည်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ကေအဲန်ယူပါတီ၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ နှင့် ချင်းဦးစီးအဖွဲ့တို့ကို မ-ဒ-ည-တ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် တစုတပေါင်းတည်း တွေ့ဆုံသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးမှာ စစ်နိုင်သူက စစ်ရှုံးသူအပေါ် ပြုမူသကဲ့သို့ တဖက်သတ် အပေါ်စီးယူထားသော တင်ကြိုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲစေသဖြင့် ပျက်ပြားခဲ့လေသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ပြုလုပ်နေစဉ် ဥပဒေတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ စုပေါင်း၍ ပြည်သူ့ကော်မတီဖွဲ့စည်းကာ နယ်အသီးသီးမှ ချီတက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ ပေါ်တွင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရလိုကြောင်း ဆန္ဒပြကြရာ လူထုတစ်သိန်း (၁၀၀၀၀၀) ကျော် ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ပျက်ပြားသွားသောအခါ စစ်အစိုးရသည် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ပြည်သူ့ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းဆောင်များကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလေသည်။ လူဖမ်းပွဲကြီး ပြီးနောက် ၁၉၆၄-ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှကို ဖျက်သိမ်းစေပြီး တစ်ပါတီအာဏာစနစ်ကို ထူထောင်လိုက်သည်။ တိုင်းပြည်တွင် ဒီမိုကရေစီလုံးဝ ဆိတ်သုဉ်းသွားလေတော့သည်။
စစ်အစိုးရ၏ ဖောက်ပြန်သော စီးပွားရေးမူများအရ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုအားလုံး ခေါင်းရွက်ဗျတ်ထိုးပါမကျန် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ရှာဖွေစားသောက်ရန် အကြပ်အတည်း အမျိုးမျိုးနှင့် ရင်ဆိုင်လာကြရသည်။ ကျပ်(၁၀၀) တန် နှင့် ကျပ် (၅၀) တန် ငွေစက္ကူများကို တရားဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲလိုက်သဖြင့် ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးမှာ ငွေကုဋေပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးနစ်နာကြရပေသည်။လယ်ယာမြေချထားရေး၌လည်း “လယ်လုပ်သူ လယ်မပိုင်ရေး” မူပေါ်တွင် အခြေခံထားသဖြင့် လယ်သမားများမှာ စစ်အစိုးရ၏ သီးစားများ ဖြစ်လာကြသည်။ လယ်သမားများ၏ ချွေးနဲ့စာဖြင့် ထွက်ရှိလာသော စပါးများကို ဝမ်းစာစပါးနှင့် မျိုးစပါးအတွက်သာ ထားစေပြီး ကျန်စပါးများကို စစ်အစိုးရဒိုင်များသို့ အားလုံးပေးသွင်းရသည်။ စက်ရုံအလုပ်အမားများသည် အခမဲ့ အချိန်ပိုလုပ် အားပေးရသဖြင့် အစွမ်းကုန် သွေးစုပ်ခံကြရပေသည်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အလုပ်ရုံစက်ရုံများမှ ထွက်ကုန်များ လျှော့နည်းလာသဖြင့် ကုန်ဈေးနှုန်း အဆမတန် မြင့်တက်ကာ ပြည်သူလူထု၏ လူနေမှု အဆင့်အတန်းမှာ လျှောကျနိမ့်ဆင်းလာတော့သည်။
စီးပွားရေးအကြပ်အတည်းကြောင့် လူထုအုံကြွလာမည်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် အမ်-အိုင်-အက်(စ်) ခေါ် စစ်စုံထောက်များ နေရာအနှံ့အပြား ချထား၍ လူထုအား ကျီးလန့်စာစား ဖြစ်နေအောင်ဖန်တီးထားလေသည်။
ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ် လုပ်ကိုင်စားသောက်သူများသည် အလုပ်လက်မဲ့ဘဝသို့ ရောက်ရှိသွားကြသည်။ လယ်သမားများသည် သီးနှံများကို ဝမ်းစာလောက်သာ စိုက်ပျိုးကြပြီး မိမိတို့ စားဝတ်နေမှုကို အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရေးအတွက် ရရာလုပ်ငန်းများကို ကြံဖန်လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရတော့သည်။ ကုန်ကြမ်းမရ၍ လည်းကောင်း၊ စက်အပိုပစ္စည်း မရ၍လည်းကောင်း၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံအများအပြားကို ပိတ်ပစ်ရသဖြင့် အလုပ်အမားများ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ကုန်ကြသည်။ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ရှားပါးသည်နှင့်အမျှ နီးစပ်ရာ ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း စသည့်နိုင်ငံများမှ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို မှောင်ခိုသွင်းယူရောင်းစားခြင်းဖြင့် လူတန်းစားအသီးသီးတို့သည် မိမိတို့ဘဝ ရပ်တည်ရေးကို သက်စွန့်ဆံဖျား ရှာဖွေလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားကြလေသည်။
တိုင်းပြည်၏ သယံဇာတပစ္စည်းဖြစ်သော ဆန်၊ သစ်၊ သတ္တု စသည်တို့ကို နိုင်ငံခြားသို့ အရောင်းရ နဲလာသောကြောင့် နိုင်းခြားဝင်ငွေ နည်းလာသည်။ စစ်အစိုးရသည် သုံးငွေစာရင်း လိုလာသည်ကို ကာမိစေရန် ကျန်ရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးတို့်ကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းပြန်သည်။ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်လာသော တရုတ်၊ ကုလား ၊ အမျိုးသားတို့ကို နိုင်ငံရင်းဖြစ်သော ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယ နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ မိမိတို့ သွားလိုရာ တိုင်းပြည်သို့ ပြန်ခိုင်းသည်။
၁၉၆၇-ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းသို့ ရောက်လာသောအခါ စပါးအထွက်နည်း၍ ဆန်ရှားပါးလာသောကြောင့် ဆန်ရရှိရေးအတွက် ရခိုင်တိုင်းစစ်တွေမြို့တွင် ဆန္ဒပြသော လူထုအား စစ်တပ်မှ စက်သေနတ်များဖြင့် ပစ်ခတ်ရာ အတုံးအရုံး သေကြေကြလေသည်။ နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင်လည်း ဆန်ရှားပါးသဖြင့် မှောင်ခိုဈေးနှုန်းတွင် အစိုးရအမှုထမ်း အရာထမ်းများပင် ဆန်တစ်တင်း ကျပ် ၁၀၀ မှ ၁၅၀ အထိ ပေး၍ ဝယ်စားရသည်။
ဆန်အကြပ်အတည်းကို လှီးလွှဲရန်အတွက် ဖောက်ပြန်သော စစ်အစိုးရသည် တရုတ်လူငယ်ကျောင်းသားများက တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်ကြီး မော်စီတုန်း၏ ရင်ထိုးတံဆိပ်ကို အသုံးပြုလာသည်ကို အကြောင်းပြု၍ တရုတ်ဗမာအရေးအခင်း ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးခဲ့လေသည်။ တရုတ်အမျိုးသားများ၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ဥစ္စာအများအပြား ဆုံးရှုံးမှုကြောင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေးတင်းမာသည့် အခြေအနေသို့ပင် ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည်။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အပါအဝင် ထိုစဉ်က မ-ဒ-ည-တ အဖွဲ့ဝင်များ၏ လှုပ်ရှားမှုကို ပီကင်းအသံလွှင့်ဌာနမှ ပြောင်ပင်ကြေငြာပေးနေခဲ့သည်။
၁၉၆၈-ခုနှစ်တွင် စစ်အစိုးရသည် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး နှင့် လူမျိုးရေးအကြပ်အတည်းများနှင့် ပိုမိုရင်ဆိုင်လာရသည်။ လူမျိုးစုံ ပြည်သူလူထုအား လှည့်စားမှိုင်းတိုက်ရန်အတွက် အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ပြန်လည်တည်ဆောက်မည်ဟု အကြောင်းပြကာ နိုင်ငံရေးသမား (၃၃) ဦး ပါဝင်သော အကြံပေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြန်သည်။ ၄င်းအဖွဲ့မှ ပေးသော အကြံဥာဏ်များကို အခြေပြုပြီး ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲပြီး တိုင်းပြည်၏ အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်မည်ဟု ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့လေသည်။
ဤလုပ်ရပ်သည် ၄င်းအကြံပေးအဖွဲ့မှ အကြံပေးချက်အပေါ် မိမိအကျိုးစီးပွား မထိပါးစေသော၊ မိမိအတွက် အကျိုးရှိသော အကြံဥာဏ်များကို ယူပြီး အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ကြိုးပမ်းချက်တစ်ခု မျှသာဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုပင် “အမျိုးသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးအတွက်” ဟု တိုင်းပြည်အားလှည့်စားမှိုင်းတိုက် ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
၁၉၆၈-ခုနှစ်မှစ၍ လွတ်လပ်စွာ အသက်မွေးကြောင်းခွင့် မရနိုင်တော့သဖြင့် စစ်အစိုးရ လက်အောက်တွင် ဆက်လက်မနေလိုကြသော နိုင်ငံသားအသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တို့သည် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့ ကိုယ့်နည်းကိုယ်ဟန်ဖြင့် ရှာကြံ၍ ထွက်ခွာကြသည်။ သို့ဖြင့် နိုင်ငံတွင် ဦးနှောက်ကောင်းသူများ၏ လုပ်အားသည် လျှော့နည်းလာပြီး ဦးနှောက်ယိုစီးမှု ကြီးစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရ၏ တစ်ပါတီ အာဏာရှင်စနစ်ကို တိုက်ဖျက်ဖြုတ်ချလိုသော နိုင်ငံရေးသမားများ၊ မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည် ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆက်စပ်၍ ခုခံတော်လှန်ရန် စိုင်းပြင်းပြင်ဆင်လာကြသည်။ ၄င်းတို့အနက် ထင်ရှားသူအချို့မှာ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု၊ ဗိုလ်ချုပ် လကျာ်၊ ဦးသွင်၊ ဦးလောယုံ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြာဒိုး၊ ဗိုလ်ချုပ်ရန်နိုင် စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီပါတီကို လျှို့ဝှက်ထူထောင်ကြပြီး လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေကြသော လူမျိုးစုအင်အားစုများနှင့် ညှိနှိုင်းခဲ့ကြလေသည်။ ၁၉၇၀-ခုနှစ်၊ မေလ(၅) ရက်နေ့တွင် ကေအဲန်ယူ အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီတို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်ပေါ်တွင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံ ညီညွတ်ရေး နှင့် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ပေါင်းစု (တ-ည-လ) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ၁၉၇၁-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ချင်းဒီမိုကရေစီပါတီ နှင့် ရှမ်းမျိုးချစ်ပါတီတို့ ထပ်မံ ဝင်ရောက်အားဖြည့် ခဲ့ကြသည်။ တ-ည-လ တပ်ပေါင်းစုသည် တန်းတူသော၊ ဒီမိုကရေစီကျသော၊ ငြိမ်းချမ်းသာယာသော တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသော၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတိုင်း ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရှိသော ပြည်နယ်ပေါင်းစုံ ပြည်ထောင်စုသမတ နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ရေးအတွက် မှန်ကန်သော လမ်းစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
သို့ဖြင့် တ-ည-လ တပ်ပေါင်းစုဝင် အဖွဲ့အစည်းတိုင်း ခေတ်မီလက်နက်ကိုင် တပ်မတော်များ၏ အင်အားမှာ တစတစ ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ အဖွဲ့လိုက် သီးခြားတိုက်ပွဲများ၊ ဆက်စပ်လှုပ်ရှားတိုက်ပွဲများနှင့် ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲများသည် စစ်အစိုးရတပ်များအား တပ်စိတ်အလိုက်၊ တပ်စုအလိုက်၊ တပ်ခွဲအလိုက် ခြေမှုန်းနိုင်သော အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ တ-ည-လ တပ်ပေါင်းစု၏ တိုက်ပွဲဝင် ရဲဘော်များသည် စိတ်ဓါတ်မြင့်မား စုစည်းညီညွတ်စွာ တိုက်ပွဲဆင်နိုင်လာကြသဖြင့် လူမျိုးစုံ ပြည်သူလူထုတို့မှလည်း အားတက်သရော ရှိလာကြကာ အဖက်ဖက်မှ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်လာကြသည်။ စစ်အာဏာရှင် အစိုးရတပ်များသည် တ-ည-လ တပ်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရတိုင်း အထိနာလာကြသဖြင့် စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းလာသည်။ တပ်သားများ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းလာသည်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် ၄င်းတို့၏ အခြေခံစစ်စခန်းများတွင် ခံကတုတ်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးကျင်းများ တူးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နေရလေသည်။ တပ်ရင်းအလိုက် ဒေသပြောင်းရွှေ့ခြင်းများလည်း လုပ်လာရသည်။
တ-ည-လ တပ်ပေါင်းစုဝင် မဟုတ်သော အခြားတော်လှန်ရေး အင်အားစုများ၏ အင်အားမှာလည်း တနေ့တခြား တိုးတက်ကြီးထွားလာခဲ့ရာ အထက်ဗမာပြည်တွင်လည်း အစိုးရတပ်များမှာ အကျအဆုံးများစွာဖြင့် ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက် နေကြရလေသည်။ အချို့ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များမှာ တပ်သားများ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းကာ တော်လှန်ရေး အင်အားစုများနှင့် လာရောက်ပူးလာကြသည်များလည်း ဖြစ်လာသည်။
တချိန်က ဗိုလ်နေဝင်းသည် “မွန်နဲ့ဗမာ ခွဲလို့မရ၊ ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် ဗမာတော်တော်များများမှာ မွန်သွေး ပါတယ်၊” ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့သော်လည်း ၁၉၇၂-ခုနှစ်၊ ဧပြီလ( )ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာသော နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းမူကြမ်းတွင် မွန်လူမျိုးအတွက် မော်လမြိုင်ခရိုင် နှင့် သထုံခရိုင်ကို မွန်ပြည်နယ်အဖြစ် ဖော်ထုတ်ပေးရန် ကြေငြာခဲ့လေသည်။ ချင်းလူမျိုးများ နှင့် ရခိုင်လူမျိုးများအတွက်လည်း ချင်းဝိသေသတိုင်းကို ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်တိုင်းကို ရခိုင်ပြည်နယ်အဖြစ် ဖော်ထုတ်ပေးရန် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ မွန်နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် တိုက်ပွဲ တနေ့တခြား ပြင်းထန်လာမှုကြောင့် မလွှဲမရှောင်သာ လိုက်လျှောလာရခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုပြည်နယ်များသည် လူမျိုးစုများက တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေသော တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် မပြည့်စုံသေးသည့်အပြင် အနှစ်သာရအားဖြင့် တစ်ပြည်ထောင်စနစ်အဖြစ်သာ ရှိနေသေးသဖြင့် လူမျိုးစုများက လိုလားသော ပြည်နယ်မျိုး မဟုတ်သေးပေ။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုအတွက်၊ အာမခံချက်ရှိပြီး၊ ကိုယ်ပိုင်အမျိုးသား လုံခြုံရေးတပ်ရှိသော ပြည်နယ်မျိုးကို ရသည်အထိ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားရန် လိုအပ်ပေသည်။
(မှတ်ချက်။ ။ ဗိုလ်နေဝင်းအစိုးရ၏ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေမူကြမ်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်းအပေါ် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ သဘောထားကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် (၁၉၇၂) ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၈) ရက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။)
မွန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်မှု လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲသည် အနှစ် (၅၀) အတွင်းသို့ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာပြီ ဖြစ်သည်။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး၏ ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းသော လမ်းခရီးတွင် မြင့်ချီတစ်ခါ၊ နိမ့်ချီတစ်လှည့် အသက်၊ သွေး၊ ချွေးတို့ဖြင့် ရင်းနှီးချီတက်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ဖြင့် မွန်အမျိုးသားတို့၏ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး သန္ဓိဋ္ဌာန်ကို ပိုမိုရင့်သန်လာစေခဲ့သည်။ မွန်တို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို ကမ္ဘာကပင် အာရုံစိုက်လာရသည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ယနေ့ကာလတွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အခြေခံလမ်းစဉ်ကို ကိုင်စွဲကာ ပဲခူး၊ သထုံ၊ မော်လမြိုင်၊ ထားဝယ်၊ မြိတ်၊ ခရိုင် တို့ကို အခြေခံကာ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ရရှိရေးအတွက် မွန်အမျိုးသားတို့၏ တပ်ဦးမှ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ချီတက်လျှက်ရှိသည်။ ပါတီ၏ ကြောရိုးမဏ္ဍိုင်ဖြစ်သော မွန်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်ကို ခေတ်မီလက်နက်တပ်ဆင်ပြီး နိုင်ငံရေးအသိဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ လူငယ်၊ အလုပ်သမားပညာတတ်များသည် ရာဇဝင်က ပေးအပ်လာသော အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ကြရန် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လာရောက်အင်အားဖြည့် ဆည်းနေကြသည်။ မွန်တော်လှန်ရေးသည် ရှေ့သို့ အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာဖြင့် လှမ်းတက်သွားတော့မည့်လက္ခဏာ ဆောင်နေပေပြီ။ ဘုံရန်သူအား တိုက်ခိုက်ခြေမှုန်းရန်အတွက် တ-ည-လ တပ်ပေါင်းဝင်အဖွဲ့အစည်းများအပြင် အခြားတော်လှန်ရေး အင်အားစုများနှင့်လည်း ဆက်စပ်လှုပ်ရှားလျှက်ရှိသည်။ ဤအချင်းအရာများသည် မွန်အမျိုးသားတို့အား မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် အပြီးသတ် အောင်ပွဲဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးမည့် လက္ခဏာများပင် ဖြစ်ပါသည်။
လိက်ကှပ် - ကႝုပညာပရေင်ဍုင်ကွာန်
Posted by ဆာန်ဇေတ် at 3:48 AM 1 comments
Labels: ကမ္ဘာ့ရေးရာ, မွန်သမိုင်း
ကျနော်လေ့လာသည့် ဘာသာရပ်များ (အပိုင်း - ၃)
ဒီတခေါက်တော့မှာတော့ Ethics လို့ခေါ်တဲ့ ကျင့်ဝတ်နှင့်ဆိုင်တဲ့ ဒဿန အခြေခံသဘောတရားတွေကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျင့်ဝတ်ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်ဟာ လူတွေရဲ့ အပြုအမူတွေ မှန်မမှန် တရားမျှတမှုရှိမရှိ ကောင်းလား ဆိုးလား စတာတွေကို လေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်အခြေအနေ အချိန်အခါမျိုးမှာ အပြုအမူတခုဟာ မှားယွင်းသလဲ? မည်သည့်အပြုအမူမျိုးဟာ တရားမျှတမှုရှိသလဲ? မည်သည့်အပြုအမူမျိုးဟာ အပစ်ပေးသင့်ပြီး မည်သည့်အပြုအမူမျိုးကို ချီးမွမ်းထိုက်သလဲ? စတဲ့ မေးခွန်းတွေဟာ ကျင့်ဝတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သန္ဒေတားဆေး သုံးဆောင်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာဟာ မှန်တဲ့အပြုအမူလား? (ဒီနေရာမှာ မှန်လားဆိုတာ ပြုမူထိုက်သလားကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။) အကြမ်းသမားတယောက် အပစ်မဲ့အရပ်သား အယောက် ၁၀၀- ကို သတ်ဖြတ်ရန်ပြင်နေချိန်မှာ တခြားတယောက်က အရပ်သားအယောက် ၁၀၀-ရဲ့ အသက်ကို ကာကွယ်ရန် အဆိုပါအကြမ်းဖတ်သမားကို သတ်ဖြတ်သည်။ ဒီဟာ လူသတ်လိုက်တဲ့အပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို လူသတ်တဲ့အပြုအမူဟာ မှန်သောအပြုအမူလား? စတာတွေကို Ethics မှာ အသေးစိတ် လေ့လာရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံရေးဒဿနဗေဒဟာလည့် Ethics ထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။
Ethics မှာ ဘာသာရပ် ကျယ်ပြန့်တဲ့အပြင် ၄င်းတို့အထဲမှာမှ ၀ိဝါဒအမျိုးမျိုး ရှိနေသဖြင့် ၄င်းတို့အားလုံးကို ခွဲခြားပြနေရန် မလွယ်ကူပေ။ Ethics မှာ လွတ်လပ်မှု (Freedom)၊ တန်းတူညီမျှမှု(Equality) ၊ တရားမျှတမှု (Justice)၊ အခွင့်အရေး (Rights)၊ တာဝန် (Responsibilities)၊ စတဲ့ နိုင်ငံရေးဒဿနတွေ ပါဝင်နေတာဖြစ်လို့ နောက်ပိုင်း အချိန်ရလျှင် အကြောင်းအရာ တမျိုးချင်းစီကို ဆက်ရေးပါမည်။ တချို့အဖွဲ့တွေက ပျော်ခြင်း (Happiness) ကို အဓိက မဏ္ဍိုင်ပြုပြီး လူတွေကို အပြုအမူကို မှားမှန်ခွဲခြားလေ့လာသည်။ ဒီမှာ ပျော်ခြင်း (Happiness) ကို မဏ္ဍိုင်ပြုအဖွဲ့မှာ အတ္တ၀ါဒ (egoism)၊ အတ္တဆန့်ကျင်ဝါဒ (Altruism)နှင့် အပျော်ရွှင်မှုရဲ့ အရေအတွက် ကိုအများဆုံး မြှင့်တင်ရေးဝါဒ (utilitarianism) ဆိုပြီး သုံးမျိုးထပ်ကွဲနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
အတ္တ၀ါဒီတွေအရ လူ့သဘာဝသည် မိမိတို့ စိတ်ပျော်ရွင်ခြင်းကို အများပျော်ရွင်ခြင်းထက် ပိုသိ ပိုခံစားနိုင်သည့်အတွက် မိမိတို့ပျော်ရေးကိုသာ ဦးစားပေးသင့်သည်။ တခြားလူတယောက်ယောက် ဒါမှမဟုတ် အများရဲ့ ခံစားချက်ကို သိနိုင်ရန်ခက်သည့်အလျှောက် အများအတွက် မိမိမှပေးဆပ်သည် ဒုက္ခရမည်ဆိုသည့် အတ္တဆန့်ကျင် ၀ါဒဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိဟု ယုံကြည်ကြသည်။ အတ္တ၀ါဒီနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် ၀ါဒတခုကား အတ္တဆန့်ကျင်ဝါဒ (Altruism) ၀ါဒဖြစ်သည်။ ယင်းဝါဒအရ လူတဦးယောက်ရဲ့ အပြုအမူဟာ အများသူ ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းရေး အများသူတို့ ပျော်ရွင်ခြင်းကို ဖြစ်စေလျှင် ထိုအပြုအမူဟာ မှန်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ အတ္တ၀ါဒီတွေ များများရှိသည့် လူအတိုင်းအ၀ိုင်းတခုသည် ငြိမ်းချမ်းမှု ပျော်ရွင်မှုမရှိနိုင်သည် ညင်းချက်ထုတ်ကြသည်။
အတ္တ၀ါဒ (egoism)၊ အတ္တဆန့်ကျင်ဝါဒ (Altruism) အစွန်းရောက်နှစ်ခုရဲ့ ကြားမှာ အပျော်ရွှင်မှုရဲ့ အရေအတွက် ကိုအများဆုံး မြှင့်တင်ရေးဝါဒ (utilitarianism) ဆိုပြီး နိုင်မည်ကြီးဝါဒတခု ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ယင်းဝါဒဟာ အရေအတွက်အများဆုံးအတွက် အကြီးဆုံးပျော်ရွင်ရေး (The Greatest Happiness for the Greatest Number of People) ဆိုတဲ့ သဘောတရားပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။ အထက်မှာဆိုခဲ့သည့်အတိုင် အတ္တ၀ါဒက မိမိတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက်သာ ပြုလုပ်ခြင်းသည် မှန်ကန်သည့် အပြုအမူဟုဆိုပြီး အတ္တဆန့်ကျင်ဝါဒက အများအကျိုးအတွက်သာ ပြုလုပ်ရန်တင်ပြ ညင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ utilitarianism ကမူ မည်သူဖြစ်စေ အရေးမကြီး၊ အရေးကြီးသည်မှာ အပျော်ရွှင်မှုရဲ့ အရေအတွက် ကိုအများဆုံး မြှင့်တင်ရေး (Happiness Maximization) ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဥမမာ ပထမအပြုအမူက ထိုအပြုအမူပြုသူအား ပျော်ရွင်မှု ၅ ယူနစ်နှင့် တခြားသူအား ၁၅ ယူနစ်ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဒုတိယအပြုအမူတခုအား ပြုသူအား ၁၀ ယူနစ်နှင့် တခြားသူအား ၈ ယူနစ် ရရှိစေမည်ဆိုပါစို့။ ပထမ အပြုအမူမှာ ပျော်ရွင်မှု စုစုပေါင်း ၂၀ ယူနစ်နှင့် ဒုတိယအပြုအမူမှ ၁၈ ယူနစ်။ ထို့ကြောင့် ပထမအပြုအမူမှာ ပြုသူအတွက် အကြိုးနည်းစေကာမူ အားလုံးခြုံလိုက်လျှင် စုစုပေါင်း ပျော်ရွှင်မှု များသောကြောင့် ပထမအပြုအမူဟာ မှန်သည်ဟု utilitarianism ၀ါဒီတွေက ဆိုကြသည်။
အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သည့် အတ္တ၀ါဒ (egoism)၊ အတ္တဆန့်ကျင်ဝါဒ (Altruism) နှင့် အပျော်ရွှင်မှုရဲ့ အရေအတွက် ကိုအများဆုံး မြှင့်တင်ရေးဝါဒ (utilitarianism) တို့ဟာ ပျော်ရွင်မှုကို အဆုံးရောက်တန်ဖိုး (Intrinsic Value) ရှိသည်ဟုဆိုပြီး မည်သည့် အပြုအမူကိုမဆို ရလဒ်အကျိုးတရားပေါ်တွင် (Consequence) အခြေခံပြီး တိုင်းတာကြသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ရလဒ်အကျိုးတရားပေါ်တွင် အခြေခံပြီး အပြုအမူကို မှား/မှန် သုံးသပ်ခြင်းကို လက်မခံသော ၀ါဒများစွာရှိပါသေးသည်။ အီမန်နူယာယ်ကန်း Emmanuel Kant ရဲ့ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဒဿနတခုကို ဥပမာအဖြင့် အကျဉ်းချုပ်ဖေါ်ပြပါမည်။
မောင်ဖြူဟာ တောထဲတွင် လမ်းလျှောက်ရင်း ရေတွင်းထဲမှာ ရေနစ်နေတဲ့ လူတယောက်ကို တွေ့တာနဲ့ ကယ်တင်လိုစိတ်ပေါ်လာပါသည်။ အဲဒါနဲ့ အဲဒီရေနစ်နေသူကို ကယ်ဖို့ရာ သူ့လက်ကို လှမ်းယူရန် ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေတွင်းအ၀နားမှာ စိုနေတာကြောင့် မထင်မှတ်ပဲ ခြေချော်သွားတာနဲ့ အဲဒီရေနစ်သူရဲ့ ဦးခေါင်းပေါ်ကို သူ့ခြေထောက်နဲ့ ဆောင့်နင်းမိသဖြင့် နဂိုကမှ မျက်ပင်ဆွဲပြီး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ဖြစ်နေတဲ့လူက တခါတဲ ရေနစ်ပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်။ မောင်ဖြူရဲ့ အပြုအမူဟာ မှန်သလား? မောင်ဖြူ လူသတ်မှုကျူးရာ ရောက်ပါသလား?
နောက်ဥပမာတခုပြပါမည်။ မောင်မဲဟာ လူတဦးကိုသတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သေနတ်ကိုင်ရင်း ပုန်းကွယ်နေသည်။ သူသတ်မဲ့လူ ရောက်လာချိန်မှာ သူ့သေနတ် ရေဆိုသွားသဖြင့် ပစ်လို့မရပဲဖြစ်နေသည်။ အဲဒီအချိန်မှာ မောင်ဖြူဟာ လမ်းထောက်တနေရာမှာ သူ့သေနတ်ကို ပြင်ဆင်နေရာ မထင်မှတ်ပဲ ကျည်ဆန်ထွက်သွားရာ မောင်မဲပစ်ရန် ကြိုးစားနေသူကို ထိမှန်သဖြစ် အဲဒီလူ သေဆုံးသွားပါတယ်။ မောင်ဖြူဟာ လူသတ်မှု ကျူးလွန်ပြီး အပစ်ရှိသလား? မောင်မဲမှာ အပစ်မရှိဘူးလား?
Utilitarianism အရဆိုလျှင် အထက်ပါ ဥပမာနှစ်ခုမှာ မောင်ဖြူဟာ လူသတ်မှုကျူးလွန်တာကြောင့် မောင်ဖြူရဲ့ အပြုအမူဟာ မှားယွင်းအပစ်ပေးထိုက်သော အပြူအမူ ဖြစ်ပါသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Utilitarianism အရ ရလဒ်အကျိုးတရား (Consequence)ကိုသာ အခြေပြုပြီး အပြုအမူတခု ကိုမှား/မှန် ဆုံးဖြတ်တာကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကန်းဝါဒီတွေက ဒါကို လက်မခံဘူး။ ပထမဥပမာမှာ မောင်ဖြူဟာ ရေနစ်နေသူကို ကယ်သင်ရန် ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်မှန်းချက် (Motive) ရှိပြီး အဆိုပါ ရေနစ်နေသူအပေါ် မကောင်းသောစိတ်ထား လုံးလုံးမရှိပါ။ ထိုသူသေဆုံးရခြင်းမှာလည်း မတော်တဆထိခိုက်မှု သက်သက်သာ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လူတို့ဟာ မိမိတို့အပြုအမူရဲ့ ရလဒ် (Consequence) ကို အမြဲတမ်း မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် Utilitarianism ရဲ့ ရလဒ်အပေါ် အခြေခံပြီး အပြုအမူတခု မှား/မှန် ပိုင်းခြားတာဟာ အခြေအမြစ် မရှိဟု ငြင်းဆိုသည်။ ကန်းဝါဒီတွေဟာ အပြုအမူတခုကို လေ့လာရာတွင် ရလဒ်အစား စိတ်မှန်းချက် (Motive) ကို အခြေခံပြီး လေ့လာသည်။
အထက်ဖေါ်ပြချက်များသည် Ethics ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဒဿနပညာ၏ အခြေခံ သဘောတရား များဖြစ်သည်။အချိန်ရလျှင် နောက်ဆက်ပြီးတော့ အခွင့်အရေး (Right)၊ တန်းတူညီမျှမှု (Equality) လွတ်လပ်မှု (Freedom)၊ တရားမျှတမှု (Justice)၊ လူမှုပဋိဥာဏ်သီအိုရီ (Social Contract Theory) အစရှိသည့် နိုင်ငံရေးဒဿနနဲ့ဆိုင်တဲ့ အခြေခံ သဘောတရားတွေကို ဆက်ရေးသွားမှာပါ။ PPE ကျောင်းသားများ အကျယ်တပွင့် လေ့လာထားသင့်သည်။
Posted by ဆာန်ဇေတ် at 3:46 AM 1 comments
Monday, 01 June 2009 19:25 ဧရာဝတီ
နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့အဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းရန် စစ်အစိုးရ၏ ကမ်းလှမ်းချက်ကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီက လက်မခံကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ သောကြာနေ့ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သူတဦးက ပြောသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် နိုင်အောင်မငေးက ၎င်းတို့၏ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုရန် ငြင်းဆိုခဲ့သော်လည်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ တပ်များသည် နယ်စပ်ဒေသကို စောင့်ရှောက်မည် မဟုတ်ဘဲ “မွန် တိုင်းရင်းသား တို့ကိုသာ စောင့်ရှောက်မည်” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ သတင်းရပ်ကွက်များ၏ အဆိုအရ စစ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်သည် ပါတီခေါင်းဆောင်များနှင့် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံပြီး နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့အဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းရန်၊ လက်နက်များကို ဆက်လက် ကိုင်စွဲထားရန် ဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီတွင် အင်အား ၇၀၀ ၀န်းကျင်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော မွန်ပြည်နယ် အခြေစိုက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တခု ရှိသည်။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီသည် စစ်အစိုးရ၏ အမျိုးသားညီလာခံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ တို့ကို သဘောတူခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်မည် မဟုတ်ဟု ကြေညာထားသည်။
မကြာသေးခင်ကလည်း ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်သည် ဝပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးပါတီ၊ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်၊ ကချင် ဒီမိုကရေစီသစ်တပ်မတော်၊ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ ၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း) တို့ကို တွေ့ဆုံပြီး နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲရေး အတွက် ဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
ထိုအဖွဲ့များက နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရေးကို လက်မခံနိုင်သေးဟူသော သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းများ မရှိသေးပေ။
နယ်ခြားစောင့်တပ် တစ်တပ်တွင် အရာရှိ အဆင့် ၁၈ ဦး အပါအ၀င် စုစုပေါင်း အင်အား (၃၂၆) ဦး ပါဝင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည်ဟု သိရသည်။ အုပ်ချုပ်မှု၊ တပ်ရေး၊ တပ်ထောက် စသည့် အရေးကြီးသည့် နေရာများနှင့် ရုံးတာဝန်များတွင် မြန်မာ့ တပ်မတော်မှ အရာရှိ ၃၀ ခန့် ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နယ်ခြားစောင့် တပ်များသည် လက်ရှိ ထိန်းချုပ်ထားသော နယ်မြေ အတွင်း၌သာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည် ဟု ဆိုသည်။
၁၉၈၉ မှ ၁၉၉၅ အတွင်း အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ စုစုပေါင်း ၁၇ ဖွဲ့ရှိကြောင်း စစ်အစိုးရ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားသည်။
KNU ဟု ထင်ရှားသည့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ ခွဲထွက်သွားသည့် အဖွဲ့ငယ်များကမူ နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့အဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းရန် သဘောတူထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
Posted by ဆာန်ဇေတ် at 1:43 AM0comments
ကသုမွဲဒုန် ၐိုန်ဒုန်ဟွံဒေါံ ဂၜုင်ဟွံဂြိပ်အာ၊
ဂၜိုင်ကႝုတှုင်ကၜာ ဒုန်ဏာည႘သဿဟ် ပြဟ်စိုပ်တိုင်ပ္ကဵ။
ညးမွဲဓ၀်ကႛာင် ရမျာင်ဟွံထတ် ဗြုလျတ်အောန်တဵ၊
ညးဂၜိုင်ကႛာင်တဵ ဖၟဵမွဲဇြဟတ် ဗြုထတ်သေင်ဟာ။
ပှာင်မွဲတှုင်စ၀် ယဝ်ရဍေန်မ္ဂး လျးဟွံတဿးအာ၊
ဂၜိုင်ကႝုတှုင်ကၜာ ယဝ်ဍေန်ဏာပၜန် ဨကန်တဿးတဵ။
တက်တဲညးမွဲ ဟွံသေၛဲာဗြုလျတ် ဟွံထတ်ဗြုတဵ၊
ညးဂၜိုင်တက်အဵ ဗြုတဵထတ်ကွေံ ဍေံလျတ်သေၛဲာအာ။
ပ္ကဵမွဲအောင်ပၜန် ဇန်ဟွံကျေဝ်ဆဲာ အမြဲာလေ၀်အောန်၊
ပ္ကဵဂၜိုင်မလောန် ဟွံအောန်အမြဲာ ဇန်ကျေဝ်ဆဲာအာ။
ညးမွဲဓ၀်ကေၜာန် ကမေၜာန်ဂွံတဲု လဇဲုကွေံကၜာ၊
ညးဂၜိုင်ကေၜာန်ဏာ ကေင်ကာကေၜာန်ဂှ် ပြဟ်တဲုဟွံယောန်။
ယွံလေ၀်ကောန်ၐိုပ် စိုပ်အခိင်ရ ပတိက်မံင်ညိ၊
မန်ဂွံဗၜးစိ နူဂျိဘွဍိက် ဘိကော်ပကောံ။
ညံင်ဂြုန်ဒက်သၛိ ကှိဒက်ခပေဲါ ကေၜာန်မွဲကရောံ၊
ဇြဟတ်ဂကောံ ဗ္ဒေါံသိန္နရာဇ် သာတ်ၐ႘မာန်ညိ။
Posted by ဆာန်ဇေတ် at 6:10 PM0comments
Labels: ကဗျာ, ဆောင်းပါး
သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ခံနေရလို့လား၊ သွေးမခွဲဘဲ သွေးကွဲနေတာလား?
သွေးခွဲအုပ်ချူပ်ရေးမူ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ခဏခဏ ကြားဖူးနေသဖြင့် နားထဲတွင် တော်တော်လေးကို ရိုးနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ မထူးဆန်းသလိုပါ။ ဗြိတိန်တွေ လူဦးရေ အနည်းငယ်ဖြင့် ကမ္ဘာ့ပေါ်တွင် ဒုတိယလူဦးရေအများဆုံးရှိသည့်အပြင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံတခုစာရင်းဝင် ဖြစ်သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပင် သိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့သည်မှာ သွေးခွဲအုပ်ချုပ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ မိမိတို့နိုင်ငံတွင်လည်း လက်ရှိစစ်အစိုးရဟာ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအကြား၊ လူမျိုးစု အင်အားစုများအကြား အမျိုးမျိုးသွေးခွဲလျှက် စည်းလုံးမှု ပျက်ပြားစေရန် အစဉ်တစိုက် ကြံစည်လျှက် ရှိပေသည်။ သက်သေပြစရာ တောင်မလိုတော့ပြီ။ အုပ်ချုပ်သည့် မည်သည့်အစိုးရမဆို ၄င်းတို့အာဏာ ဆက်လက် ဆုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက် ဒီလိုဗျူဟာမျိုး ကျင့်သုံးမည်။ သွေးခွဲ၍သွေးကွဲသဖြင့် တော်လှန်ရေးခရီး နှောက်နှေးကြန့်ကြာသည်မှာ မထူးဆန်းပါ။ သို့သော် သွေးမခွဲဘဲ သွေးကွဲသဖြင့် တော်လှန်ရေး ခရီးမပေါက်သည့်အပြင် တော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်း ကိုယ့်အမျိုးသားအချင်းချင်း တိုက်ခိုက်သတ်ဖျတ်နေကြသည်မှာ ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းလှပေသည်။
မိမိတို့ တိုင်းပြည်အတွင်းရှိ အမျိုးသားများ (တဖွဲ့ခြင်းစီ) အတွင်းတွင်လည် ဇတ်တူသားစား အချင်းချင်း သတ်ဖျတ်ကြသဖြင့် မလိုအပ်ဘဲ အသက်ဆုံးရှုံးမှုများ အိုးအိမ်ပျက်စီးမှုများ စသည့် ၀မ်းးနည်းဖွယ်ရာ ကောင်းသည့် ဖြစ်ရပ်များနှင့် မကြာခဏ ဆိုသလို ကြုံခဲ့ရ ကြုံနေရဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတာကို ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ကျနော့်အတွေ့အကြုံအရ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ယခုလိုဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်တိုင်းတွင် တူညီသော နောက်ခံအကြောင်း ရှိပေသည်။ ယင်းကား “ခွဲထွက်ရေး ကိုယ်ပိုင်တပ်ထူထောင်ရေး” ဟူသော အစွဲပယောဂကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။ ဒီနေရာမှာ ကျနော်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်း၏အမြင်အရ အဲဒီ “ခွဲထွက်ရေး ကိုယ်ပိုင်တပ်ထူထောင်ရေး” ဆိုတာကို တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်တခုထက် တော်လှန်ရေး ကပ်/ရောဂါတခုအဖြစ် ရှုမြင်ပါသည်။ ရောဂါကား ရင့်နေပြီ ကုစားရန်ပင် မလွယ်တော့ပြီ။
သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေး ဆိုတဲ့ဝေါဟာရဟာ နားထဲမှာ ရိုးလာသလဲ့သို့ “ခွဲထွက်မည်၊ ကိုယ်ပိုင်ပါတီထောင်မည်၊ ကိုယ်ပိုင်တပ်ထောင်မည်” ဆိုသည့် စကားလုံးတွေကိုလည်း ခဏခဏ ကြားနေရသည်။ ယ္ခုလည်း ကြားနေရဆဲဖြစ်သည့်အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသည်။ ဒီနေရာမှာ “လိုအပ်လျှင် ကိုယ်ပိုင်တပ် ထူထောင်မည်” ဆိုသည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ် ဆွေးနွေးလိုပါသည်။ ဘယ်အရာမဆို လုပ်တော့မည် (လုပ်ဖို့ ပြောတော့မည်) ဆိုလျှင် ကာလဒေသရဲ့ နောက်ခံ အကြောင်းအရင်းတွေနဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီးမှ လိုအပ်သလို ပြုမူလုပ်ဆောင်သင့်ပေသည်။ ဆိုဗီယက်ဦးဆောင် ကွန်မြူနစ်အုပ်စုနှင့် အမေရိကန်ဦးဆောင် အရင်းရှင်အုပ်စု အကြား ဖြစ်ပွါးနေသည့် စစ်အေးတိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွါးနေစဉ် ကာလအတွင်းတွင် တပ်ထောင်မည့်ကိစ္စသည် ပြောဆိုဆွေးနွေးရန် သင့်လျှော်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် ကိစ္စတခုဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ အုပ်စုနှစ်ခုစလုံးမှ မိမိတို့စစ်ရေး အနိုင်ရရေးအတွက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း လက်နက်ကူညီတပ်ဆင်ပေးခြင်း ငွေကြေးနှင့် နည်းပညာ အကူအညီပေးခြင်း စသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
သို့သော် ၁၉၉၁ စစ်အေးတိုက်ပွဲ ပြီးဆုံးသည့်နောက်ပိုင်းတွင် အခြေအနေမှာ တမျိုးပြောင်းသွားသည်။ အဆိုပါအင်အားကြီး အုပ်စုများသည် Ideology ယခင် လက်ဝဲလက်ယာ နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်အစား အမျိုးသားအကျိုးစီးပွါး (စီးပွားရေး) တွင်အာရုံစိုက်လာပြီး မည့်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုမှ လက်နက်/ငွေ အင်အားပေးရန် စိတ်မ၀င်စားတော့။ အရင်က လက်နက်များကို ဒေသတွင်းနိုင်ငံများတွင် အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ အခုအချိန် မလွယ်တော့။ အိမ်နီးချင်းဖြစ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံသည် အရင်က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ဒေသတွေကို ကာကွယ်ရေးကြားခံနယ် Buffer Zone အဖြစ်အသုံးပြုလိုသဖြစ် အကူအညီများ ပေးခဲ့သည်။ ယ္ခုတော့ နယ်စပ်ဒေသတွေကို ကုန်သွယ်ရေးဇုံအဖြစ် အသုံးချနိုင်ရန် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများကို တစုံတရာ ဖိအားပေးနေပြီး။ ဒီနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဟွေဟင်ဆိပ်ကမ်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံတွင် ၂၀၁၅ အမှီ အာဆီယံနိုင်ငံများတင် အရင်းအနှီး ကုန်စည်နှင့် လုပ်အားစုများ လွတ်လပ်စွာ ရွေ့လျှားစီးဆင်းနိုင်မည့် အီးယူစတိုင် ဘုံဈေးကွက် ဖွင့်လှစ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီ။ ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်သည်လည်း တစုံတရာသော အတိုင်းအတာအထိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အင်အားစုများကို ဖိအားပေးလာမည်မှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပါ။ ဒီလိုနောက်ခံ အခြေအနေအောက်မှာ “ကိုယ်ပိုင် တပ်ဖွဲ့မည်” ဆိုသည့် အပြောအဆိုနှင့် ပက်သတ်၍ နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်မိပါသည်။
“ခွဲထွက်ရေး” သည် အမျိုးသားနှင့် တော်လှန်ရေးကို ကောင်းကျိုးပေးသည်ကို တကြိမ်တခါမျှမတွေ့ဘူး၊ ၄င်း၏အကြိုးဆက်အဖြင့် မျိုးချစ်တော်လှန်ရေး ရဲဘော်များနှင့် ခေါင်းဆောင်များ အသက်ဆုံးရှုံးရခြင်း၊ အချင်းချင်း စစ်ခင်းနေကြရသဖြင့် ရန်သူအပေါ်အာရုံစိုက်နိုင်မှု လျော့နည်းလာခြင်း စသည့်ဆိုးကြိုးများသာ တွေ့ရသဖြင့် အထက်မှာဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ခွဲထွက်ရေးဟာ မိမိတို့အမျိုးသားကို ဒုက္ခပေးနေသည့် ရောဂါတခုဟု ယူဆပါသည်။ ထိုရောဂါဟာ ဘာကြောင့် မကြာခဏ မိမိတို့အမျိုးသားအတွင်း ဖြစ်ပွါးရေနည်း? ရောဂါသည် ရောဂါပိုးရှိမှ ဖြစ်နိုင်သလို ခွဲထွက်ရေးသည်လည်း ၄င်းကို မြေတောင်မြှောက်ပေးနေသည့် အတွေးအမြင်တမျိုးမျိုး အဖွဲ့အစည်းတခုခု လူပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ယောက် ရှိလေ့ရှိပါသည်။ မိမိတို့ အမျိုးသား (၀ါ) တော်လှန်ရေး တွင်လည်း အဲဒီလို ရောဂါပိုးတွေ ရှိနေပေသည်။ ယ္ခင်ဖြစ်ရပ်တွေကို လေ့လာပါက မဖြစ်ပွါးမီ ခွဲထွက်ရေးကို အားပေးသည့် အပြောအဆို အရေးအသားများရှိခြင်း၊ ခွဲထွက်သည့်အခါ အင်အာရှာဖွေစုဆောင်းပေးမည်သူရှိခြင်း၊ ပြည်သူများအား မူရင်းအဖွဲ့အစည်းကို မုန်းတီးလာစေရန် သွေးထိုးခြင်း စသည့်အပြုအမူတို့ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျနော်အနေဖြင့် အဲဒီလိုအဖြစ်အပျက် အပြုအမူတွေကို ခဏခဏ ကြားခဲ့ရ ကြားနေဆဲဖြစ်သည်သဖြင့် ၀မ်းနည်းမိပါသည်။ “နွားကွဲလျှင် ကျားဆွဲမည်”တဲ့။ အခုတော့ နွားကွဲသည်မဟုတ် အချင်းချင်း ဝှေ့သတ်နေကြသဖြင့် ကျားဆွဲရန်မလို စားရန်သာလိုသည်။ သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ခံနေရလို့လား၊ သွေးမခွဲဘဲ သွေးကွဲနေတာလား? ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဝေဖန်သုံးသပ်ရေး လိုလာပြီ။
Posted by ဆာန်ဇေတ် at 8:30 PM 1 comments
ကျနော်လေ့လာရတဲ့ ဘာသာရပ်များ (အပိုင်း -၂) သိမှုဗေဒ (Epistemology)
အခုအပိုင်းမှာ ဆက်ပြီးတော့ ဒဿန (Philosophy) မှာ ကျန်နေသေးတဲ့ သိမှုဗေဒ (Epistemology) နှင့် ပက်သက်ပြီး တင်ပြသွားမှာပါ။ သိမှုဗေဒ (Epistemology) ဟာ အသိဥာဏ်နှင့် ပက်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးပါတယ်။ ဥပမာ - ကမ္ဘာပေါ်မှာ ချောင်း၊ မြစ်၊ တော၊ တောင်၊ အိမ်၊ ကျောင်း စသဖြစ် အရာဝတ္ထုတွေ တည်ရှိနေတာ လူသားတွေ ဘယ်လိုသိသလဲ? သာမန်လူတွေအနေနဲ့ကတော့ “သိတာပေါ့ ကျနော်တို့ မြင်နေရတာ၊ ကြားနေရတာ၊ ထိနေရတာဟာ” စသဖြင့်ဖြေလိမ့်မည်။ သာမန်လူတွေကတော့ အာရုံငါးပါးမှတဆင့် ရလာတဲ့ အသိဥာဏ်ကို လက်ခံကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒဿနဆရာတွေကြတော့ ဒါကိုလက်မခံဘူး။ အာရုံငါးပါးမှ ရတဲ့ အသိကို ၄င်းတို့က ပြန်လည် စမ်းစစ်မှုမရှိသေးတဲ့ သာမန်အသိ (Commonsense Believe) လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ သိမှုဗေဒ (Epistemology) မှာ အခက်ဆုံးမေးခွန်းတခုက “တစုံတခုတည်ရှိနေတယ်လို့ သိတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ ဘယ်လိုလုပ် သိလဲ?” ဆိုတဲ့မေးခွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျနော်အရှေ့မှာ အခု ကွန်ပျူတာရှိတယ် ဆိုပါစို့။ အဲဒါကို သိတယ်လို့ ကျနော့်ကိုကျနော်ထင်နေတယ်။ သိမှုဗေဒက အဲဒီလို ကျနော့်ရှေ့မှာ ကွန်ပျူတာရှိနေတယ်လို့ သိနေတာကို ကျနော်ဘယ်လိုသိသလဲ။ သူလို့ဆိုလိုတာက အာရုံငါးပါးကနေ သိတာလား ဒါမှမဟုတ် တခြားနည်းလမ်းမှ တဆင့်သိတာလား။
(Epistemology) သိမှုဗေဒမှာလည့် အာရုံငါးပါးကို လက်ခံတဲ့အုပ်စုနှင့် လက်မခံတဲ့အုပ်စုဆိုပြီး ဂိုဏ်းတွေ ကွဲနေပြန်တယ်။ အာရုံငါးပါးကို သူတို့လက်မခံတဲ့ ၀ါဒကို ဆင်ခြင်တုံဝါဒ (Rationalism) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ၄င်းတို့က လူသားတို့ရဲ့ အာရုံငါးပါးဟာ တခါတရံ လူသားတွေရဲ့ အသိစိတ်ကို လှည့်စားတယ်။ ဒါဆိုယင် တခါလှည့်စားတဲ့ အဲဒီအာရုံငါးပါးဟာ အမြဲတမ်းလှည့်စားနေတာကော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား? ဒါဆိုယင် အခုကျနော်တို့မြင်နေရတဲ့အရာကကော တကယ်တည်ရှိရဲ့လား? ကျနော်တို့ အာရုံက အသိစိတ်ကို လှည့်စားနေတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား? အာရုံငါးပါးဟာ အသိစိတ်ကို လှည့်စားနိုင်တဲ့အပြင် အဲဒီအာရုံခံစားချက်တွေဟာ အချိန်အခါအလိုက် ပြောင်းနေတာပဲ။ ဥပမာ နံနက်စောစောပိုင်းမှာ မျက်ပင်တွေကို အစိမ်းနက်ရောင်လို့ အာရုံက အသိစိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ နေ့လည်ပိုင်းကျတော့ အစိမ်းဖျော့ရောင်လို့ အာရုံက အသိစိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ ဒါဆိုရင် မျက်ပင်ဟာ ဘာအရောင်လဲ? သာမန်လူတွေကတော့ နေ့လည်ပိုင်းမှာ နေအပူရှိုန်ကြောင့် မျက်ပင်ဟာ အရောင်ပြောင်းသွားတာလို့ ငြင်းချက်ထုတ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် ဒဿနဆရာတွေက ဒါကိုလက်မခံဘူး။ ကျနော်တို့ အာရုံငါးပါးမှ တပါးဖြစ်တဲ့ မျက်စိသာ အမှန်တရား တသိတရားကို ရစေမယ်ဆိုလျှင် မျက်ပင်ဟာ အစိမ်းနက်ရောင်ကော အစိမ်းဖျော့ရောင်ပါ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကိုတနည်း ပြန်ပြောမယ်ဆိုယင် အစိမ်းနက်ရောင်ဟာ အစိမ်းနက်ရောင်မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောနေတာနဲ့တူပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် “(က) ဟာ (က) မဟုတ်ဘူး” ပေါ့။ အဲဒီလို အာရုံငါးပါးမှတဆင့် ရတဲ့အသိတရားမှာ အတွင်းပဋိပက္ခ (Self-contradiction) တွေ ရှိနေတာကြောင့် ဆင်ခြင်တုံအဖွဲ့က လက်မခံခြင်းဖြစ်တယ်။
ဒီဆင်ခြင်တုံဝါဒီ (Rationalists) တွေ အမှန်တရားကို ရှာဖွေရာမှာ အာရုံငါးပါးကို မယုံကြည်ဘူးဆိုလျှင် သူတို့ က အမှန်တရားကို ဘယ်ကစရှာကြသလဲ? ဒီဝါဒီတွေက အမှန်တရားရှာဖွေရာမှာ အာရုံငါးပါးအစား ဆင်ခြင်တုံတရားကို သုံးမှ ထာဝရအမှန်တရားရနိုင်မည် လို့ဆိုကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့နည်းလမ်းဟာ သင်္ချာသဘောတရားနှင့် ယုတ္တိဗေဒ (Logic) တွေကို သုံးခြင်းဖြင့် ထာဝရအမှန်တရား ရှာဖွေမည်ဖြစ်သည်။ ဆင်ခြင်တုံဝါဒီအယူအဆအရ အမှန်တရားဟာ ထာဝရအမှန်တရား Necessary Truth နှင့် ယာယီသဘောဆောင်တဲ့ အမှန်တရား Contingent Truth ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဥပမာ “ကျည်းကန်းသည် မဲနက်သော အရောင်ရှိသည်” ၀ါကျသည် အမှန်တရားဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် နောင်တချိန်မှာ ချားစ်လ်ဒါဝင်ရဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် (Evolution) သဘောတရားအရဖြစ်စေ၊ တခြားအကြောင်းအရာ တခုခုကြောင့်ဖြစ်စေ ကျည်းကန်းရဲ့အရောင်ဟာ ပြောင်လဲနိုင်တဲ့ သဘောရှိတဲ့အတွက် “ကျည်းကန်းသည် မဲနက်သော အရောင်ရှိသည်” ဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ အမှန်တရားဟာ မှားသွားနိုင်သည့် သဘောရှိသည်။ အဲဒီလို အာရုံငါးပါးမှတဆင့်ရရှိတဲ့ အသိကို ဆင်ခြင်တုံဝါဒီတို့က Contingent Truth လို့ခေါ်ကြသည်။ “၁+၁=၂” ဒါမှမဟုတ် “မျဉ်းပြိုင်နှစ် ဘယ်တော့မှ မဆုံနိုင်” ကဲ့သို့ သင်္ချာသဘောတရားနှင့် ယုတ္တိဗေဒ နည်းလမ်းတွေသုံးပြီး ဆင်ခြင်ခြင်းမှရလာတဲ့ အသိတရားတွေကြတော့ ဘယ်သောအခါမှ မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွက် ဒီလိုအမှန်တရားတွေကို Necessary Truth လို့ ဆင်ခြင်တုံဝါဒီတို့က ဆိုကြသည်။ ဒါဆိုလျှင် အရာတိုင်းကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သင်္ချာသဘောတရားနှင့် ယုတ္တိဗေဒ ပညာရပ်တွေသုံးပြီး အသိတရားရှာနိုင်မလဲလို့ မေးစရာဖြစ်လာပြီး။ ဆင်ခြင်တုံဝါဒီတွေမှာ Deduction နှင့် Intuition တို့ လို သင်္ချာနှင့် ယတ္တိဗေဒ ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းတွေ ရှိပါသည်။ (နည်းနည်းရှည်နေမှာစိုးလို့ ဒီနေရာမှာ မရေးသေးပါ။ နောက်အချိန်ပေးလျှင် ယုတ္တိဗေဒ(Logic) အကြောင်းသီးသန့်ရေးပါမည်။)
သိမှုဗေဒ (Epistemology) မှာ တခြား ဂိုဏ်းတခုကတော့ လက်တွေ့အခြေစိုက်ဝါဒ (Empiricism) လို့ခေါ်ပါတယ်။ (လက်တွေ့အခြေစိုက်ဝါဒဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ Pragmatism နှင့်တူနေသဖြင့် သတိပြုပါ။ ဒီနေရာမှာ အာရုံငါးပါးမှတဆင့် အသိတရားရှာတဲ့ ၀ါဒကို ဆိုလိုသည်။) လက်တွေ့ဝါဒီတွေဟာ ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် အမှန်တရားရှာဖွေနိုင်သည် ဆိုတဲ့အယူလို လုံးဝ ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ ဒီဝါဒီတွေ ငြင်းချက်ထုတ်ဖို့ သဓကပြတာက လူသားတွေ ကျည်းကန်းကို မျက်စိဖြင့်မမြင်ပဲ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကျည်းကန်းမဲတာ ဖြူတာကို သိမလဲတဲ့။ ဒီလက်တွေ့အခြေစိုက်ဝါဒကို ဒဿနဆရာ အတော်များများက လက်မခံကြဘါဘူး။ အကြောင်းကတော့ စကြာဝဠမှာ လူသားတို့ရဲ့ အာရုံငါးပါးနှင့် ထိတွေ့မခံစားနိုင်တဲ့ အရာတွေ အများရှိတာကို လူသားတွေ လက်ခံထားလို့ပါ။ ဥပမာ အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ ဆွဲငင်အားတို့ ဟာမျိုးဆိုရင် မည်သူမှ အာရုံငါးပါးဖြင့် ထိတွေ့ခံစားနိုင်တာ မဟုတ်သော်လည်း ရှိနေတာကိုတော့ လက်ခံနေကြပေသည်။
သိမှုဗေဒ (Epistemology) ကို တချို့က အမှန်/အသိတရားရှာဖွေရေးသဘောတရား (Theory of Knowledge) လို့လဲခေါ်ကြပါသည်။ ဒီပညာရပ်နှင့် ပက်သက်ပြီးတော့လည်း ပလေတိုတို့ ရှေးခေတ်မှာ ယနေ့ခေတ်အထိ ခေတ်အဆက်အဆက် ဒဿနဆရာ အဆက်ဆက် ညင်းခုံနေကြဆဲဖြစ်သည်။ ကျနော် အချုပ်တင်ပြခဲ့တဲ့ ဆင်ခြင်တုံဝါဒ (Rationalism) နှင့် လက်တွေ့အခြေစိုက်ဝါဒ (Empiricism) အပြင် (Externalism) (Internalism) (Constructivism) (Infinitism) (Foundationalism) (Skepticism) စတဲ့ဝါဒတွေ ဂိုဏ်းတွေ ရှိနေပါသေးသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများ ပလေတို၊ ဂျွန်လော့ဂ်၊ အီမန်နူယယ် ခန်း၊ ဒေးဗစ်ဟုမ်း စတဲ့ ဆရာကြီးတွေရဲ့ ဒဿနများကို အသေးစိတ် ဆက်လက်သင့်သည်။ ကျနော်အတွက်တော့ နဲနဲရှုတ်/ခတ် တာကြောင့် လေးလေးနက်နက်တင်ပြရန် မဖြစ်နိုင်တော့ပေ။ PPE လေ့လာမည့် ကျောင်းသားများ ရှောင်လွဲ၍မရသဖြင့် အနည်းအကျဉ်း ကြိုတင်လေ့လာထားသင့်သည်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကျင့်ဝတ်(Ethics) အကြောင်းကို ဆက်တင်သွားမည်။ Ethics က လက်တွေ့ပိုဆန်ပြီး ပိုစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းမည်ဟု ထင်ရသည်။ Ethics ပြီးရင် ဘောဂမှာ သင်ရတဲ့ သဘောတရားအကျဉ်းတွေကို ဆက်တင်သွားမည်။
Posted by ဆာန်ဇေတ် at 2:15 AM 1 comments
ကျနော်လေ့လာရတဲ့ ဘာသာရပ်များ (အပိုင်း -1)
ကျနော်ကျောင်းစမတတ်ခင်အချိန်တုန်းက PPE ဘာသာရပ်ကို ရွေးသာရွေးလိုက်တာ။ ဘာတွေသင်ရမယ်ဆိုတာတွေ ရေရေရာရာမသိခဲ့ဘူး။ အခုတော့ ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင် ကိုယ်အရင်ကတွေးခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ အခုလက်ရှိ လေ့လာနေရတဲ့ဟာနဲ့က တလွဲစီဖြစ်နေသလိုပဲ။ ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ ကျောင်းမတတ်ခင် အဓိကဘာသာရပ် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တာဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ဝါသနာမပါတဲ့ဘာသာရပ်၊ ကိုယ့်အနာဂတ် လုပ်ငန်းနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို ရွေးမိလျှင် အချိန်ကုန်ငွေကုန်ပြီး အကျိုးမရှိသလို ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါနဲ့ပဲ နောက်လာမဲ့ ကျောင်းသားတွေ မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှု ပြုနိုင်ရန်နှင့် ဒီဘာသာရပ်တွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ မိတ်ဆွေများ အပြင်းပြေဖတ်နိုင်ရန် ဆိုပြီး “ကျနော်လေ့လာရတဲ့ ဘာသာရပ်များ” ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးမှာ စိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေရေးပြီး ပိုစ့်တင်လိုက်တာပါ။
PPE မှာ ဒဿန၊ နိုင်ငံရေးသပ္ပံနဲ့ ဘောဂဗေဒ သုံးမျိုးစလုံးကို အညီအမျှ လေ့လာရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသပ္ပံက လူအများသိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် မတင်ပြတော့ပါ။ ဒဿနဗေဒ (Philosophy)နှင့် ဘောဂဗေဒ (Economics) နဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ နဲနဲလေးဆွေးနွေးသွားမှာပါ။ ဒဿနဗေဒဆိုတာကို တိုတိုနဲ့ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက် ပေးဖို့တော့ တော်တော်ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒဿနမှာ သိမှုဗေဒ (Epistemology)၊ ကျင့်ဝတ် (Ethics)နှင့် တက္ကိတဗေဒ (Metaphysics) စတဲ့ ဘာသာခွဲသုံးမျိုးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ဒီပညာရပ်ဟာ လူသားတွေရဲ့ စူးစမ်းလိုစိတ်က စတင်လာတာပါ။ ဥပမာ ရှေးလူတွေက ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘာအရာဝတ္ထုတွေ ရှိသလဲ? တည်ရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာ ဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသလဲ? မီးလောင်သွားတဲ့ ထင်းဟာ အစိုင်အခဲကနေ အငွေ့အဖြစ်ကို ပြောင်းသွားတာ ဘာကြောင့်လဲ? ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးဟာ တက္ကိတဗေဒ (Metaphysics) နဲ့ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေပေါ့။
တက္ကိတဗေဒနဲ့ဆိုင်တဲ့ အဓိကအရေးအကြီးဆုံး မေးခွန်းတခုက “စိတ်ဆိုတာ တကယ်ပဲ ရှိလား? ဒါမှမဟုတ် ခန္ဒာကိုယ်ပဲရှိပြီး စိတ်ဆိုတာ ခန္ဒာကိုယ်အပိုင်းအစ ဦးနှောက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်လား?” ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။ ဒီမေးခွန်းနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လဲ တက္ကိတဗေဒ (Metaphysics) မှာ ရုပ်/နာမ်(စိတ်)နှစ်မျိုးစလုံးရှိခြင်းကို လက်ခံတဲ့ဝါဒ (Dualism) နှင့် ရုပ်ဝါဒ (Materialism) ဆိုပြီး အယူဝါဒနှစ်မျိုးထပ်မံကွဲပြားကြပြန်တယ်။ ရုပ်/နာမ်ဝါဒီ (Dualists) တွေ ယူဆတာက အရာဝတ္တုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ခန္ဒာကိုယ်နဲ့ အရာဝတ္ထုမဲ့တဲ့စိတ် နှစ်မျိုးတို့ဟာ လူသားတွေမှာ သီးခြားစီ တည်ရှိနေကြပါတယ်။ ဒီဂိုဏ်းတွေရဲ့ ငြင်းချက်တခုကို ဥပမာပေးရလျှင် လူသားနှင့် ကျောက်/သစ်တုံးတွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ ကျောက်တုံးတွေဟာ နာကျင်မှုဝေဒနာ ပျော်ရွင်ခြင်း စတဲ့ခံစားချက်တွေမရှိဘူး။ လူမှာကြတော့ ဒီခံစားချက်တွေရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီနာကျင်ခြင်း ပျော်ရွင်ခြင်းတွေကို ခံစားတဲ့အရာတခုရှိရမယ်။ အဲဒီဟာက “စိတ်” ဖြစ်ရမယ်တဲ့။
ရုပ်/နာမ်ဝါဒီတွေဟာ စိတ်ဟာ ခန္ဒာကိုယ်နဲ့ သီးခြားစီတည်ရှိကြောင်း အမျိုးမျိုး သက်သေသာဓက ပြပြီး စိတ်နှင့် ခန္ဒာ ဆက်စပ်ပုံကိုလဲ ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါတယ်။ ဥပမာ စိတ်က ခန္ဒာအပိုင်အစဖြစ်တဲ့ ကျနော့်လက်ကို စာရိုက်ပါလို့ခိုင်းတာကို လက်ချောင်းတွေက ဘယ်လို တုန့်ပြန်တယ် ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။ စိတ်တည်ရှိကြောင်း သက်သေပြပြီးတော့ ရုပ်/နာမ်ဝါဒီတွေက စိတ်ရဲ့ ၀ိသေသလက္ခဏာတွေကို ဆက်လက်ရှင်းပြကြပါတယ်။ စိတ်ဟာ ဘယ်အချိန်မှာ ခန္ဒာကိုယ်နဲ့ ပေါင်းစပ်တယ် ဘယ်အချိန်မှာ ခန္ဒာမှ ထွက်ခွါတယ်စသဖြင့်ပေါ့။
အထက်မှာဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း တက္ကိတဗေဒ (Metaphysics) ရဲ့ တခြားဆန့်ကျင်ဖက် ၀ါဒတခုက ရုပ်ဝါဒ (Materialism) ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ဝါဒီတွေက “စိတ်” ရှိတယ်ဆိုတာကို လုံးဝလက်မခံပါဘူး။ ၄င်းတို့က လူသားမှာ အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခန္ဒာပဲရှိတယ်။ စောစောက Dualists တွေပြေတဲ့ ပျော်ရွင်ခြင်းတို့ နာကျင်ခြင်းတို့ဟာ အရာဝတ္ထုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ခန္ဒာအပိုင်းအစဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် (Function of Brain)ကြောင့်သာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ခံစားချက်တွေဟာ ဦးနှောက်ရဲ့ အခြေအနေအပေါ် အခြေခံပြီး လိုက်ပြောင်းလဲတယ်လို့ ၄င်းတို့က အဆိုပြုပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ပျော်ရွင်ခြင်းဆိုတဲ့ ခံစားချက်ဟာ ဦးနှောက်အခြေအန (က)၊ နာကျင်ခြင်းဟာ ဦးနှောက်အခြေအနေ (ခ)၊ ဒေါသထွက်ခြင်းဟာ ဦးနှောက်အခြေအနေ (ဂ) စသဖြင့်ပါ။
ရုပ်ဝါဒီတွေက စိတ်မရှိကြောင်း သက်သေသာဓက အများထဲက ကျနော်တခုနှစ်ခုလောက် တင်ပြမှာပါ။ ကနေ့ခေတ်မှာ နာကျင်မှုဝေဒနာတွေကို လျှော့ချနိုင်တဲ့ ထုံဆေးတို့လို ဆေးမျိုးတွေ လူ့စိတ်ကို ခေတ်တပျော်ရွင်စေတဲ့ ဆေးတွေရှိပါတယ်။ ဒီဆေးတွေဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ဦးနှောက် အခြေအနေတွေကို ပြောင်းလိုက်တာပါပဲ။ တကယ်လို့များ စိတ်ဟာ “စိတ်”ဟာ ခန္ဒာနဲ့ သီးခြားတည်ရှိနေလျှင် ဒီဆေးတွေဟာ နာကျင်မှုကို ဘယ်လိုလုပ် လျှော့ချနိုင်လဲ? အဲဒါကြောင့် လူသားတွေမှာ “စိတ်” မရှိဘူးတဲ့။ ရုပ်ဝါဒီတွေ “စိတ်” မရှိကြောင်း ငြင်းဆိုတဲ့ နောက်သာဓက တခုက ဒီလိုပါ။ ဇီဝဗေဒ ပညာရပ်အရ ကလေးဟာ မမျိုးဥနဲ့ ဖိုမျိုးဥတို့ကနေ ပေါင်းစပ်ပေါက်ပွားလာတာပါ။ အဲဒီ မ/ဖို မျိုးဥတွေမှာ အရာဝတ္ထုသက်သက်သာဖြစ်ပြီး “စိတ်” မပါဝင်ပါ။ ဒီ”စိတ်”မပါတဲ့ အရာနှစ်ခု ပေါင်းစပ်ပြီးမှ ဖြစ်ပေါ်ပေါက်ပွားလာတဲ့ လူသားကလေးငယ်ဟာ ဘယ်လိုလုပ် “စိတ်”ဆိုတာကြီး ရှိပါ့မလဲ? အဲဒါကြောင့် လူသားတွေမှာ “စိတ်” မရှိ ခန္ဒာသက်သက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ ရုပ်ဝါဒီတွေက ဆိုတာဖြစ်တယ်။
PPE မှာ အထက်မှာ အချုပ်တင်ပြခဲ့တဲ့ဆိုခဲ့တဲ့ ဟာတွေကို အသေးစိတ် လေ့လာရပါတယ်။ ပလေတိုတို့ရှေးခေတ်မှ ဂန္တာဝင်ခေတ် မော်ဒန်ခေတ် စတဲ့ ကနေ့ခေတ်တိုင် ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ မတူကွဲပြားတဲ့ ဒဿနဆရာတွေရဲ့ အဆိုအငြင်းတွေကို လိုက်လေ့လာရပါတယ်။ PPE ကိုတတ်တော့မယ်ဆိုလျှင် ဒီဟာတွေကို စိတ်ဝင်စားသလား မ၀င်စားဘူးလား အကျိုးရှိလား မရှိလား စဉ်းစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ နောက်ပိုင်းတွေမှာ ဒဿနပညာရပ်မှာ ကျန်နေသေးတဲ့ သိမှုဗေဒ (Epistemology)နှင့် ကျင့်ဝတ် (Ethics)တို့ကို ဆက်တင်မည်။ အဲဒါပြီးမှ ဘောဂဗေဒမှာ ဘာတွေသင်ရသလဲဆိုတာ ဆက်တင်မည်။
Posted by ဆာန်ဇေတ် at 11:44 PM0comments
P တစုံနဲ့ E တလုံးမှာ လေ့လာရင်း။
မနက် Coffee ညနေ Whisky နဲ့
Philosophy ဆိုတာကြီးကို တွေ့ပြီ
Posted by ဆာန်ဇေတ် at 9:47 PM0comments
မောင်ဝံသ (ပိတောက်မြေမှတဆင့် ရဲကျော်အောင်ဘလော့ဂ်ပို့စ်မှ တင်ထားတာကို ပြန်ကူးပြီး တင်ထားပါသည်။)
( ဇန်န၀ါရီလ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် Popular News journal ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဆရာမောင်ဝံသရဲ့ ဆောင်းပါးကို မျှဝေ ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာတာနဲ့ အမျှ ပြည်တွင်း ဂျာနယ်တွေမှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးများကို ပိုပြီး ဖော်ပြ ခွင့်ပြုလာတာကို သတိထားမိပါတယ်။ တင်းပြည့် ကျပ်ပြည့် လွတ်လွတ် လပ်လပ် ဆွေးနွေး ရေးသားခွင့် မရှိသေးပေမယ့် အခုလို ဆောင်းပါး လေးတွေကို တွေ့လာရတာဟာ တိုးတက်တဲ့ ပြောင်းလဲမှု တစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူမိပါတယ်။ )
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ တည်ဆောက်ပြီဆိုရင် ပါလီမန် (လွှတ်တော်) ရှိလာမယ်။ အဲသည် လွှတ်တော်သို့ ပြည်သူများက ရွေးကောက် တင်မြှောက်တဲ့ “အမတ်” ခေါ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ရှိလာမယ်။ (အမတ်ဆိုတာ တည်ကြည် ဖြောင့်မတ်စွာ ဆောင်ရွက်သူလို့ ဆိုလိုပါတယ်) ၎င်းအမတ်များကို ရွေးကောက် တင်မြှောက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ရှိလာမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ တွေမှာ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အမတ်လောင်းများ ကိုယ်စားပြုတဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီများ ရှိလာမယ်။ သို့အားဖြင့် နိုင်ငံရေး သမားများလည်း ရှိလာမယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေက ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံကြမှာပါ. . .
ပြည်သူလူထုက ဆန္ဒမဲပေးပြီး ရွေးကောက် တင်မြှောက်ရမယ့် နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ ဘယ်လို အရည်အချင်းတွေ ရှိသင့်သလဲ။ ပြည်သူတွေက ဘာကိုကြည့်ပြီး မဲပေးကြမှာလဲ။ သည်အချက်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရေးမှာ အလွန် အရေးပါ ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးသမား ဆိုတာ အထက်တန်းလွှာ၊ လူလတ်တန်းစား၊ ပညာတတ်၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဟောင်း၊ သူဌေး ဘယ်သူ ဖြစ်ရမယ်၊ ဘယ်သူတော့ မဖြစ်ရဘူးဆိုတာ အကန့်အသတ် မရှိပါဘူး။
ဆရာဝန် တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း၊ ဆေးတက္ကသိုလ် စသည်ဖြင့် အနည်းဆုံး ၁၇ နှစ်လောက် ပညာ သင်ကြားရမယ်။ အနည်းဆုံး တစ်နှစ် အလုပ်သင်အဖြစ် အတွေ့အကြုံ ယူရမယ်။ ဘာကြောင့် သည်လောက် နှစ်တွေများများ သင်ကြား လေ့ကျင့်ရသလဲ ဆိုတော့ ဆရာဝန်ဆိုတာ လူ့အသက်နဲ့ စပ်ပြီး အလုပ်လုပ် ကြရတာကိုး။ တတ်ယောင်ကား ဆရာဝန် လက်ထဲ ရောက်သွားလို့ကတော့ အသက်ပါ ဆုံးရှုံးရနိုင်တယ်။
ဒါဆိုရင် ဆရာဝန် တစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်း မပြည့်စုံမှုဟာ တစ်ကြိမ်မှာ လူတစ်ယောက် အသက်လောက်ပဲ ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်။ တိုင်းပြည် ကံကြမ္မာကို ၀ကွက် အပ်ရမယ့် နိုင်ငံရေး သမားတွေ အရည်အချင်း မပြည့်စုံရင်၊ အမြော်အမြင် မရှိရင် (ဥပမာ- မဖြစ်သင့်ဘဲ စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရင်) လူ့အသက်ပေါင်း ရာထောင်ချီ ဆုံးရှုံးရနိုင်တယ်။ ဥပမာ- စီးပွားရေး မူဝါဒ တစ်ချက် မှားလိုက်ရင် တိုင်းပြည် မွဲသွားနိုင်တယ်လို့ မပြောနိုင်ဘူးလား။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးသမားဟာ တခြား အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း သမားတွေထက် အရေးကြီးတယ်။ အမြော်အမြင် ရှိဖို့ လိုတယ်။ သည်တော့ နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်ဖို့ ဘာအရည်အချင်း လိုအပ်သလဲ။
အမေရိကန် စာရေးဆရာ ရော်ဘင်ရေဗင်က “နိုင်ငံရေးသမားမှာ ပထမဆုံး လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းက နိုင်ငံရေး လုပ်ချင်စိတ်ပဲ။ နိုင်ငံရေးသမား လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဦးဆုံး မိမိကိုယ် မိမိ ဆန်းစစ်ဖို့က တကယ် နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်ရဲ့လား ဆိုတာပဲ” လို့ ရေးခဲ့ဖူးတယ်။
ရော်ဘင်ရေဗင်က “နိုင်ငံရေးသမားဟာ မွေးရာပါ ပါရမီရှင် ဖြစ်ဖို့မလိုဘူး။ တချို့ ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက နိုင်ငံရေးသမား လုပ်ချင် ဖြစ်ချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက် ထားရှိခဲ့ကြပေမယ့် ဖြစ်မလာသူတွေ အများကြီးပဲ။ တချို့ကျတော့ မတော်တဆ နိုင်ငံရေး နယ်ထဲ ရောက်ပြီး အောင်မြင်သွားတတ်ကြတယ်။ အမေရိကန် သမ္မတဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ရေဂင်ဟာ ရုပ်ရှင်မင်းသားဘ၀ကနေ နိုင်ငံရေးနယ်ထဲ ရောက်ပြီး သမ္မတအထိ တက်ဖြစ်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား”လို့ ထောက်ပြတယ်။
ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်လာဖို့ အကြောင်းတရားတွေကို ဆက်ရေးတယ်။
(၁) နိုင်ငံရေးသမားလုပ်ဖို့ မဆုံးဖြတ်ခင် နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒ ဘယ်ကလာသလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးပါ။ ဘာကြောင့် နိုင်ငံရေး လုပ်ချင်သလဲဆိုတာ ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ် ရှိကြမယ်။ အကြောင်းရင်းအမှန်ကို ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြောပြစရာ မလိုဘူး။ တိုင်းရေး ပြည်ရေးကို ကိုယ့်နယ်ပယ် ဒေသအကျိုးကို တကယ် နှစ်နှစ်ကာကာ လုပ်ချင်လို့ ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်။ ဘ၀တက်လမ်း ရှာချင်လို့ ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်။ အာဏာရရင် ငါနှင့် မတူ ငါ့ရန်သူတွေကို မှတ်လောက် သားလောက် ဆော်လိုက် နှက်လိုက်မဟဲ့ ဆိုတဲ့ ဒေါသဇောကြောင့် ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်။ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်ပဲ သိတယ်တော့ မထင်နဲ့။ ကြာလာတဲ့အခါ ကျတော့ ပြည်သူတွေကလည်း သိလာမှာပဲ။ ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေး လုပ်ချင်စိတ် အလွန်အမင်း ပြင်းပြနေပြီဆိုရင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။
(၂) နိုင်ငံရေးပါတီ ရွေးပါ။ နိုင်ငံရေးသမား လုပ်ပြီဆိုရင် ခြံစည်းရိုး ခွထိုင်လို့ မရပါ။ မိမိခံယူချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ပါတီရှိနိုင်သလို ပါတီတွေရဲ့ မူဝါဒနဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို လေ့လာပြီး မိမိက နှစ်သက် သဘောကျတဲ့ ပါတီကိုလည်း တွေ့နိုင်တယ်။ မိမိ နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားကြောင်း သိလို့ ချဉ်းကပ် စည်းရုံးတာတွေနဲ့လည်း ကြုံရတတ်တယ်။ ပါတီက မိမိကို မရွေးပါစေနဲ့။ မိမိက ပါတီကို ရွေးပါ။ ပါတီမူဝါဒနဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးရင် သေသေချာချာ ကြည့်ရမှာက (က) ပါတီခေါင်းဆောင်မှု၊ (ခ) ပါတီမှာ မိမိတွဲဖက် လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ။
(၃) သင်ပါဝင် ဆောင်ရွက်မယ့် ပါတီ ရွေးပြီးရင် သင်ကြည်ညို လေးစားတဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဦးနဲ့ ဆွေးနွေးပါ။ လူချင်း မတွေ့နိုင်ရင် စာရေးဆက်သွယ်ပြီး တိုင်ပင်ပါ။ သင်သိချင်တာတွေ မေးပါ။ သင်ဖြစ်ချင်တာတွေ တင်ပြပါ။ သင့်ကို လမ်းညွှန်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါ။
(၄) အောက်သက်ကျေပါစေ။ ပါတီမှာ သင်ထမ်းဆောင်နိုင်မယ့် တာဝန်ကို စေတနာ့ ၀န်ထမ်းလုပ်ပေးပါ။ အချိန်ပြည့် လုပ်နိုင်သလား။ အချိန်ပိုင်း လုပ်နိုင်သလား၊ သင်ပေးနိုင်တဲ့ အချိန်ကို မိမိနယ်မြေ တာဝန်ခံထံ သတင်းပို့ပါ။
(၅) လေ့လာ ဆည်းပူးမှု အဆက်မပြတ်ပါစေနှင့်။ အထူးပြု လေ့လာမှုနှင့် အထွေထွေ လေ့လာမှု နှစ်မျိုးစလုံးကို ဆက်လုပ်ပါ။ ဥပမာ- သင့်ကို မော်တော်ယာဉ် လုပ်သားများ စည်းရုံးရေးအတွက် တာဝန်ပေးထားရင် မော်တော်ယာဉ် လုပ်သားများရဲ့ ဘ၀၊ သူတို့ရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒ၊ သူတို့အတွက် လိုအပ်ချက် စတာတွေကို အထူးပြု လေ့လာနေရမယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးက အလုပ်သမား ရေးရာတွေကိုလည်း မျက်ခြည်မပြတ်ရဘူး။
(၆) အချိန်တန်ပြီဆိုရင် အဆင့်ဆင့်သော ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပါ။ သည်လိုနဲ့ပဲ သင်ဟာ နိုင်ငံရေး သမားကောင်း တစ်ယောက် အဖြစ် ဘ၀ကို နေသွားလို့ ရပါတယ်။
ရော်ဘင်ရေဗင်က နိုင်ငံရေးသမား ပျိုးထောင်မှုအကြောင်းကို ဆက်ရေးတယ်။ သူက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ အရည်အချင်း ပြည့်ဝတဲ့ နိုင်ငံရေး သမားကောင်းတွေ အရေအတွက်များမှ ရုပ်ပိုင်းရော၊ စိတ်ပိုင်းပါ ကြီးပွား တိုးတက်မယ်လို့ ယုံကြည်ဖို့ လိုတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် စာသင်ကျောင်းတွေကနေ နောက်မျိုးဆက်အတွက် နိုင်ငံရေးသမားတွေ လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ပေးရမယ်လို့ သူက တိုက်တွန်းတယ်။ ကျောင်းတွေမှာ အသင်းအဖွဲ့တွေကို ဦးဆောင်မယ့် ကျောင်းသား အမှုဆောင် လူကြီးရွေးပွဲတွေ လုပ်ပေးရမယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ကို လေ့ကျင့်ပေးရမယ် စာတော်နေရုံနဲ့ မပြီး ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး ၀င်ဆံ့မှ လူချစ်လူခင်များမှ ထောက်ခံဆန္ဒမဲ များများရမှာဆိုတဲ့ အသိကို သွတ်သွင်း ပေးရမယ်လို့ သူ့ရဲ့စာတမ်းမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ပါလီမန် မိခင်နိုင်ငံကြီးလို့ ထင်ရှားတဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံက “နိုင်ငံရေးသမား အကြောင်း သိကောင်းစရာ” မှတ်စုလေး တစ်ခုကို မြန်မာပြန် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ယခုတင်ပြချက်ဟာ သူတို့ဆီက ကျောင်းသား လူငယ်လေးများကို ဗဟုသုတအဖြစ် သင်ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာဖြစ်လို့ လိုရင်း အချက်များကိုပဲ ဖော်ပြထားပါတယ်။
သူတို့ဆီမှာ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုခုမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူ၊ ပါလီမန် အမတ်၊ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံ ရာထူးဌာနနန္တရ တစ်ခုခုမှာ ၀င်ရောက် အရွေးခံသူ၊ သက်ဆိုင်ရာ ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး စည်းရုံးပေးသူတွေကို ခေါ်ပါတယ်။
ပါလီမန် အမတ်ဖြစ်သွားရင် လစာ တစ်နှစ် ပေါင် ၆၀၀၀၀ မှ ပေါင် ၁၃၆၄၀၀ ရပါတယ်။
အမတ်တွေမှာ အလုပ်ချိန်ရှိတယ်။ ရက်သတ္တတစ်ပတ်လျှင် လန်ဒန်မှာ လေးရက်၊ မိမိရဲ့ မဲဆန္ဒနယ်မှာ တစ်ရက်နေကြရတယ်။
အရည်အချင်းအားဖြင့် ပါလီမန်အမတ် အများစုဟာ GCSE အောင်ပြီးသူ၊ A အဆင့်နဲ့ အောင်သူ၊ ဘွဲ့တစ်ခုခု ရပြီးသူတွေ ဖြစ်တယ်။
ပါလီမန် အမတ် (MP-Members of Parliament) ဆိုတာ မဲဆန္ဒနယ် အသီးသီးက မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေကိုရွေးကောက် တင်မြှောက်လိုက်သူ ဖြစ်တယ်။ အမတ်အများစုဟာ နိုင်ငံရေးပါတီများကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ အမတ် အနည်းစုကတော့ တစ်သီး ပုဂ္ဂလ ၀င်အရွေးခံခဲ့ကြပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ အမတ်လစာက တစ်နှစ်အတွက် ပေါင် ၆၀၀၀၀၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးက ပေါင် ၁၃၆၄၀၀ ရပါတယ်။
ဗြိတိသျှ နိုင်ငံရေး လောကမှာ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိတဲ့ အလုပ်ဖြစ်တယ်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အလုပ်လို့ မခေါ်ပါဘူး။ လခကြေးငွေ ရသော တာဝန်ရှိသော အလုပ် (job)လို့ သုံးနှုန်းပါတယ်။ အချိန်ပို လုပ်ကိုင်ရတဲ့ အခါများမှာ လွှတ်တော် စီမံဌာနကို စာရင်းပေးပို့ပြီး အိုဗာတိုင် တောင်းနိုင်ပါသေးတယ်။
ပါလီမန် အမတ်တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ ပညာအရည်အချင်း ဘယ်လောက်ရှိရမယ်လို့ သတ်မှတ်ချက် မရှိပါဘူး။ သို့သော် ဗြိတိန်က အမတ်အားလုံး လောက်ဟာ အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့် အထက်တန်းအောင်ပြီး သူများဖြစ်တယ်။ သူတို့ဆီမှာ (General Certificate of Secondary Education-GCSE) လို့ ခေါ်တယ်။ ပြီးတော့ အေအဆင့် (A Level grades) အောင်ပြီးသူနဲ့ ဘွဲ့ရပြီးသူတွေ များပါတယ်။
ဗြိတိန်မှာ နိုင်ငံရေးထဲ မ၀င်ခင် တခြား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်တစ်ခုခုကို လုပ်ခဲ့ကြတာ များတယ်။ နောက်လေး ငါးဆယ်နှစ် လောက်နေမှ နိုင်ငံရေး ၀င်လုပ်လေ့ ရှိတယ်။ တချို့ကျတော့ လက်ရှိပါလီမန် အမတ်တစ်ယောက် ယောက်ဆီမှာ သုတေသနမှူး၊ လူမှု ဆက်ဆံရေးမှူး၊ အကြံပေးစသည်ဖြင့် အချိန်အတော် ကြာကြာ ၀င်လုပ်ပြီးမှ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်တယ်။ အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီ လူကြီးနေရာတွေ အတွက် ရွေးကောက်ပွဲဝင် အရွေးခံတာကို အရင်လုပ်တယ် (မြူနီစီပါယ် ရွေးကောက်ပွဲလို့ ခေါ်ပါတယ်)။
ဗြိတိသျှ နိုင်ငံရေး သမားတွေထဲမှာ စိတ်ကူးပေါက်လို့၊ ကြုံကြိုက်လို့၊ အဖော်ကောင်းလို့ နိုင်ငံရေး ၀င်လုပ်တယ် ဆိုတဲ့သူ မရှိသလောက်ပါပဲတဲ့။ နိုင်ငံရေး စိတ်ထက်သန်သူတွေဟာ ကောလိပ်ကျောင်းသား ဘ၀ကတည်းက နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားပြီး စိုက်လိုက်မတ်တတ် လေ့လာခဲ့ကြတယ်။ စာတွေ့၊ ကိုယ်တွေ့ လေ့လာ ဆည်းပူးကြတယ်။ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေ ယုံကြည် ကိုးစားလောက်တဲ့ အရည်အချင်း မိမိမှာ အထိုက်အလျောက် ရှိနေပြီလို့ စိတ်ချရတော့မှ ရွေးကောက်ပွဲဝင် အရွေးခံကြတာ ဖြစ်တယ်။
တစ်နည်းပြောရရင် ဗြိတိန်က နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ ဆရာဝန်လုပ်မယ်လို့ ဘ၀ရည်မှန်းချက်ထားသူ၊ အင်ဂျင်နီယာ လုပ်မယ်လို့ ဘ၀ရည်မှန်းချက်ထားသူတွေ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ ပညာရပ်တွေကို နှစ်မြှုပ်လေ့လာ ဆည်းပူးကြသလို နိုင်ငံရေးပညာကို လေ့လာ ဆည်းပူးခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်။ မိမိသဘောကျတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကိုလည်း အဲဒီကာလ ကတည်းက ရွေးချယ်လေ့ရှိတယ်။
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးရင် မဲပေးလို့ရတယ်။ အရွေးခံလို့ ရတယ်။ အဲသည်အချိန်မှာ နိုင်ငံရေး စိတ်သန်သူဟာ Political activist လို့ ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အဖြစ် ကွန်ဆာဗေးတစ်၊ လေဘာ၊ လစ်ဘရယ် ကြိုက်ရာ ပါတီတစ်ခုခုမှာ ပါဝင်လုပ်အားပေးလို့ ရတယ်။ အဓိကတော့ နယ်မြေဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲတွေ၊ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ အောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့ဝင်ခေါ် မဲဆွယ်သူများ အဖြစ် ပါဝင် လှုပ်ရှားရတာ ဖြစ်တယ်။
အဲသည် အဆင့်မှာပဲ တစ်သက်လုံး နေသွားပြီး ပါဝင်အရေးခံတဲ့ အချိန်ပြည့် နိုင်ငံရေးသမား အထိ မလုပ်ဘဲ နေသူတွေလည်း အများကြီး ရှိတယ်။ သူတို့ကို အောက်ခြေ သိမ်း နိုင်ငံရေးသမား (grass roots politicians)တွေလို့ ခေါ်ပါတယ်။ သူတို့လို လူတွေများများ ရှိမှ နိုင်ငံရေး ပါတီတစ်ရပ်ဟာ အခြေခိုင်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ပါဝင် အရွေးခံတဲ့အထိ ဆက်လုပ်သွားမယ့် လူတွေကတော့ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း ပြည်သူလူထု ယုံကြည် ကိုးစားလောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ပုံရိပ်ပေါ်လာအောင် မိမိကိုယ်ကို ဖြည့်ဆည်းနေရပါတယ်။
ပါလီမန် အမတ်အဖြစ် အရွေးခံတယ်ဆိုတာ မိမိပါတီက အမတ်လောင်း အဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်ရုံနဲ့ အမတ်ဖြစ်သွားတာ မဟုတ်ပါ။ အနည်းဆုံး ပါတီသုံးလေးခုက ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သုံးလေးဦး ယှဉ်ပြိုင်ကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက် တင်မြှောက်သူများက မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်မှာ မဲလိမ်မဲခိုးလို့လည်း မရပါ။ မဲခိုးမှု ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာလည်း မရှိပါ။
ထူးခြားတာတစ်ခုက ဗြိတိန်မှာ နိုင်ငံရေးပါတီကို ကြိုက်လို့ မဲပေးတာ၊ မကြိုက်လို့ မဲမပေးတာထက် မိမိတို့ မဲဆန္ဒနယ်က အမတ်လောင်းကို ကြိုက် မကြိုက်က အဓိကပိုကျပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီမူဝါဒထက် အမတ်လောင်းရဲ့ အရည်အချင်းကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာ ဒီမိုကရေစီ နည်းကျတယ်လို့ သူတို့ ယုံကြည်ကြပါကြောင်း။
Posted by ဆာန်ဇေတ် at 7:05 PM0comments
ဟိုးအရင် ICFC ဘ၀ရယ်က
(အိုကွယ်) ၀ိုင်းဖွဲ့ကြ တခါတရံမှာဖြင့်
ဆင်၊ ခြသေ့င်္ ဘီယာအစုံညီတွဲပါလို့
တလတခါ Outing ထွက်ရင်ပ
အ၀စား မူကထ ဆိုင်ရယ်နှင့်
သဲသောင်ပြင်ဈေးစုံတဲ့ lake မှာဖြင့်
အခုတော့ Uni ဘ၀မှာဖြင့်
စပါးနှံ - ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် စပါးနှံတံဆိပ် ဈေးအနိမ့်ဆုံးအရက်တမျိုး။
ယာဆင်း - အပေါစားဆေးလိပ်သောက်ဆေးတမျိုး။
ပုလွေတရာ - Hundred Pipers အရက်
Composer - မင်းသစ္စာ
Posted by ဆာန်ဇေတ် at 7:04 PM2comments
မှတ်ချက်။ ။ ဒီကဗျာလည်း သစ္စဖောက် ရန်သူနဲ့ပေါင်း ကိုယ်ကြိုးရှာ လူတစုအတွက်လက်ဆောင်။
Posted by ဆာန်ဇေတ် at 7:19 PM0comments
Mon History (4)